NEWS COLLECTION: October 2015
သာကေတမြို့နယ်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရင်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တနိုင်ငံလုံးက အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လို တုံ့ပြန်တာကိုမှ မလုပ်ပဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာကို အရှိန်မပျက်ဆက်လုပ်ကြဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အရေးပေါ် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်း အပါအ၀င် အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သာကေတမြို့နယ်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး လုပ်နေရင်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ညက သာကေတ ၃ ရပ်ကွက်၊ မာန်ပြေ ၈ လမ်းမှာ ဓားနဲ့ အခုတ်ခံခဲ့ရတာပါ။
အဲဒါကြောင့် ဦးနိုင်ငံလင်း အပါအ၀င် သုံးယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ဆေးရုံကြီးမှာ အတွင်းလူနာအနေနဲ့ ကုသမှုခံနေရပါတယ်။ ဓားနဲ့ ခုတ်သူတွေကို ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး တရားဥပဒေနဲ့အညီ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် အဖွဲ့များ နှင့် မထိုးရသေးသည့် အဖွဲ့များ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမည်
အစိုးရနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၈ ဖွဲ့နှင့် လက်မှတ်မထိုးသေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းရန်အတွက် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ပထမပတ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း ၈ ဖွဲ့တို့က NCA ကို အစိုးရနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု အစိုးရနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည် “ကျနော်တုိ့ ရက်တော့ ညှိနေတယ်။ ကျနော်တ်ို့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေ ပြန်သုံးတပ်ဖို့ရှိသလို၊ ဆက်ပြီး ပိုမိုခိုင်မာအောင် ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ဆွေးနွေးမှာပေါ့။ လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတွေဆွေးနွေးရမယ်” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(JMC)နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲ ကော်မတီ(UPDJC) အဖွဲ့ဝင်များလည်း ၎င်းတို့၏ ဆွေးနွေးချက်များကို တင်ပြမည် ဖြစ်ပြီး ထိုအစည်းအဝေးပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့လည်း သူတို့ ဆွေးနွေးတာတွေ ကျနော်တို့ ၈ ဖွဲ့ကို ပြန်လည်တင်ပြမှာပေါ့။ သူတို့ခုရန်ကုန်မှာ ဆွေးနွေးနေတာကိုး၊ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ပဲ ကြာမှာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလည်း ဆက်လုပ်ရမယ်ထင်တယ်”ဟု ပဒိုကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည်။ အစိုးရနှင့် NCA ကို လက်မှတ် မထိုးသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပန်ဆန်း ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးနောက် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်း ၈ ဖွဲ့ ထပ်မံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်တွင် အစိုးရနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်တွင် အစိုးရနှင့် လက်မှတ်မထိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS/SSA)မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလက ပြောသည်။
“ဒီအန်စီအေကို ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်ကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်သလို၊ လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ မပါတဲ့ အဖွဲ့တွေ ဘယ်လို ဆက်စပ်သွားကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြမယ်။ အန်စီအေမှာ ဘယ်လို ဝင်ပါကြမယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ NCA ကို အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်က အစိုးရနှင့် RCSS/SSA အပါအဝင် KNU၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော်(DKBA)၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNLA-PC)၊ ပအိုဝ့်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၊ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP)၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(ABSDF)တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်ထိ ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ(UWSP) ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းတွင် အစိုးရနှင့် NCA လက်မှတ်မရေးထိုးသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့ဖြစ်သော UWSP အပါအဝင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ကရင်နီအမျိုသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတိ(SSPP)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ( NMSP)၊ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော်(MNDAA)၊ ပလောင်(တအာင်း) အမျိုးသးလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(TNLA)၊ ရက္ခိုင်တပ်မတော်(AA)၊ နာဂအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ(NSCN-K)၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု(NDAA) တို့မှ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ အထောက်ကူပြု နည်းပညာ အပလီကေးရှင်းများ
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးဖို့ ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်များစုစည်းမှုကွန်ရက်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ရွှေဝါရောင်သဃံဃာတော်များစည်းစည်းမှု ကွန်ရက်တာဝန်ခံ အရှင် ဦးစန္ဒာသီရိက မိန့်ပါတယ်။
“လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက် အဓိက ဒီ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ဆိုရင် ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးပြီးမှု ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဘာပဲပြောပြာ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာရောက်တယ်ပေါ့။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်မပေးဘဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျင်းပသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဦးဇင်းတို့က ယူဆတယ်။”
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်သားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သာယာဝတီထောင်အတွင်း လက်ရှိ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း၊ ကိုသန်းထိုက်၊ ကိုမျိုးထက်ပိုင်နဲ့ ကိုမျိုးမြတ်စံကို လုံးဝထောက်ခံကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ ပြောဆိုနေပေမယ့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ဥပေဒမဲ့ မတရား ဆက်လက်ဖမ်းဆီးမှုတွေ အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်မှိုင်းဆန်းဟာ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ကတည်းက ထောင်တွင်းအစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေပြီး ထောင်တွင်းဆေးရုံမှာပဲ ထားရှိတယ်လို့ ကိုအောင်မှိုင်းဆန်းရဲ့ အမျိုးသမီးက ပြောပါတယ်။
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ တခြားကျောင်းသားတွေကိုလည်း အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုရပ်တန့်သွားအောင် ဖိအားပေးမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေးမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဗကသဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကို ကို ဒီကနေ့ ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ယမန်ယူပြီး အင်းစိန်ထောင်ကို ပိုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ ရုံးပြန်ချိန်းထားတယ်လို့လည်း ဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်နေပိုင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်က ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့ မဲရုံမှာ EUလေ့လာစောင့်ကြည့်
တီးတိန်မြို့နယ်ရှိ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော် ဆန္ဒပြမည်
ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ် ဟိုင်မွာလ်ရွာသစ်ရှိ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား အဖွဲ့ကို ရိခေါရ်ဒါရ်မြို့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိခြင်းအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိ၍ အလုပ်သမားတစ်ထောင်ကျော် ဆန္ဒပြမည်ဟု ဟိုင်မွာလ်ရွာသစ်အလုပ်သမားစုမှူး ဦးဝိုလ်လုန်းက ပြောကြားသည်။
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် တီးတိန်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး နှင့် ရိခေါရ်ဒါလ်မြို့တွင် ဆန္ဒပြမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်း အကြောင်းကြားထားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒါကို လုံးဝလက်မခံပါ။ ကိုယ့်မြို့နယ်အလိုက် အုပ်ချုပ်ချင်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ လုပ်ချင်တယ်၊ အခုဘာတွေ ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း မသိတော့ဘူး"ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။
ဟိုင်မွာလ်ရွာသစ်သည် တီးတိန်မြို့နယ်၏ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအဖြစ် အစိုးရက၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားအဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သိမ်းဆည်းခံမြေယာပြသနာနဲ သုံးသပ်အကြံပြုစာတမ်း မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲ
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားနေသည့်ပါတီ မဲအနိုင်ရပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်လျှင် ၎င်းဥပဒေဖျက်သိမ်း ခံရမည်ဟု တိပိဋကဓရ ရမ္မာဝတီဆရာတော် ဦးဣန္ဒပါလ မိန့်ကြား
မျိုးစောင့် ဥပဒေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေသည့် ပါတီများရှိနေပြီး ၎င်းပါတီ မဲအနိုင် ရပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့လျှင် မျိုးစောင့် ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းခံရမည်ဟု တိပိဋကဓရ ရမ္မာဝတီဆရာတော် ဦးဣန္ဒပါလ မိန့်ကြားသည်။
ကျောက်ဖြူတွင် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က မျိုးစောင့်ဥပဒေအောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ်ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပစဉ်တွင် တိပိဋကဓရ ရမ္မာဝတီဆရာတော် ဦးဣန္ဒပါလက ယင်းသို့ မိန့်ကြားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ မျိုးစောင့် ဥပဒေကိုဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ပါတီတွေရှိနေတယ်။ ယင်းပါတီ မဲအနိုင်ရလို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင် ဒီဥပဒေ ဖျက်သိမ်းခံရနိုင်တယ်။ အခွင့်အရေးဘာမှ မရဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ လက်ရှိ အစိုးရကို ပုန်ကန်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား။ သံဃာတော်တွေကို ဘာမှတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ပေါင်းနေလို့ အပြစ်ပြောနေကြတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါမှ ကျောက်ဖြူမှာ၊ ရခိုင်မှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓ သာသနာ နေလိုလလို တောက်ပ နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ရမ္မာဝတီဆရာတော် ဦးဣန္ဒပါလက မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူတွင် မျိုးစောင့်ဥပဒေအောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ်ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ(၂၅) ရက် နေ့လည် ၂ နာရီခန့်က ကျောက်ဖြူမြို့ ဦးဥတ္တမပန်းခြံတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေအောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ် ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုချီတက်ပွဲကို ကျောက်ဖြူ သာသနာ့ ဗိမာန်မှ စတင်၍ ဦးဥတ္တမပန်းခြံထိ လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့သည်။၎င်းနောက် ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံတွင် ဟောပြောပွဲကို ကျင်းပ ခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူမြို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဥက္ကဌ မူလာရာမဆရာတော် ဦးအင်္ကုရ ကလည်း ဘာသာခြားလူမျိုးခြားနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းခြားခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေဟာ စနစ်တကျ ဥပဒေ မရှိသည့် အတွက် ပြသနာပေါ်လာသည့်အခါ နစ်နာခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း၊ သို့အတွက် မျိုးစောင့် ဥပဒေမှာ ရှိကိုရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဆရာတော်တစ်ချို့၏ ဟောပြောခြင်းမှာ အမျိုးဘာသာ သာသနာထက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို မဲဆွယ် သလိုဖြစ်နေသည့် အတွက် အခမ်းအနား တက်ရောက်လာသည့် ပရိတ်တစ်ချို့၏ ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေအောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ်ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ သံဃာတော်များနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့ခံလူပေါင်း (၁၀၀၀)ခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ရော်ဘာဈေးကျ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့၌ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် ၅၄၊ ၄င်း၏နေအိမ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်ပြုလုပ်မည်ဟု ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။
''နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီခြံထဲမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မှာပါ။ မဲဆွယ်ပွဲအတွေ့အကြုံ ရှင်းမှာဖြစ်နိုင်သလို တခြားဘာ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းမလဲဆိုတာတော့ အတိအကျမသိရသေးဘူး။'' ဟု ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင် ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးသိန်းဦးက မဇ္ဈိမသို့ပြောသည်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အတွေ့အကြုံများအား ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော အကြောင်းအရာများလည်း ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နှစ်ဦးက ပြောကြားမည်ဟု ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးကြည်တိုးက ပြောသည်။
''၂ ရက်နေ့ အတိအကျ ကြေညာပေးမယ်။ ၃ ရက်နဲ့ ၄ ရက်နေ့တွေမှာ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တစ်တိုက်ကို နှစ်ဦး စာရင်း ပေးပြီး ကတ်ပြားလာထုတ်လို့ရပါတယ်။ အမေး အဖြေ ကဏ္ဍလည်းပါတော့ မေးခွန်းတွေ ကြိုရေးလာပေါ့။'' ဟု၎င်းက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ထို့ပြင် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့၌လည်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏမြို့ဦးစေတီတော်ဝင်း အတွင်း၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်ဟောပြောမည်ဟု အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောသည်။
''နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏမြို့ဦးစေတီမှာ လူထုတွေ့ဆုံဟောပြောပွဲလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုမိန့်ကျပြီးပါပြီ။ ဘဘဦးတင်ဦး အရင်ပြောမယ်၊ ပြီးရင် အစ်မစု ဟောပြောမယ်။'' ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် ဟောပြောပွဲပြီးလျှင် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမ၌ ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တို့မှ လွှတ်တော်အသီးသီး၌ ၀င်ရောက် ရွေးချယ်ခံကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ရှိသည်ဟု ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ သိရသည်။
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် အမြင်
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကုန်ဈေးနှုန်းများ သိသာစွာမြင့်တက်
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် တလခန့်အလိုမှစ၍ အခြေခံ စားသုံးကုန်ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်လာကြောင်း စားသုံး သူ အိမ်ရှင်မများနှင့် ရောင်းချသူများကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ရေကြီးမှုများ နှင့်တဆက်တည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအပေါ် စိုးရိမ်မှု၍ ကြိုတင်ဝယ်ယူ သိုလှောင်လာခြင်းကြောင့် ဈေးတက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“အဓိကကတော့ ရွေးကောက်ပွဲနီး လာလေလေ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တခုခု ဖြစ်လာမှာ၊ နိုင်ငံရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှာ အပြောင်းအလဲက ချောမွေ့ပါ့မလားဆိုတဲ့ ပြည်သူ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာပါ စိုးရိမ်ပူပန် နေရတဲ့အချက်ပေါ့။ အဲဒီလို အချိန်မှာ ပြည်သူက ပိုပြီးတော့ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ဆန်တွေ ဆီတွေကို ၀ယ်ထားပြီးစုကြတယ် ” ဟု ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှ အိမ်ထောင်ရှင်မတဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်ခင်ဝေလွင်က ပြောဆိုသည်။
အောက်တိုဘာလအတွင်းမှ စတင်ကာ ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းကို သိသာစွာ ခံစားလာရခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဆ နီးပါးခန့် မြင့်တက်လာခြင်း ဖြစ်ရာ စားသုံးသူများသာမက ရောင်းချသည့် ဈေးသည်များအနေဖြင့်လည်း အခက်အခဲ ဖြစ်နေရကြောင်း သိရသည်။
သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ ဒညင်းကုန်းဈေးများမှ ကုန်စိမ်းဝယ်ယူပြီး မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် လက်ကား ပြန်ရောင်းချသော ကိုဟိန်းကိုက ယခုနှစ် ရေကြီးမှုက ကုန်စိမ်းဈေးမှာ နှစ်ဆကျော်တက်သွားကြောင်း၊ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမှာ အခါတိုင်းထက် ပိုဆိုးကြောင်း ဆိုသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရာတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်သာမက အခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သည့် ဆန်၊ကြက်သွန်နီဈေး များလည်း လိုက်ပါမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန်ဈေးမြင့်တက်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းဦးက“ ဒီနှစ် ဆန်ဈေးနှုန်းတွေ ကြီးမြင့်နေရတာက နိုင်ငံခြားကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကလည်း မြင့်တက်နေတော့ ဆန်ဈေး နှုန်းက မြင့်လာတယ် ၊ ဆန်ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာငွေကြေးနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်။ အရင်က ဒေါ်လာဈေးက ၁ထောင် အခုက ၁၂၇၀၊ ၁၂၈၀ နဲ့တွက်ရတာဆိုတော့ မြင့်လာတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါ ဆန်ဈေးမှာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်လက တောင်ပျံဆန်တပြည်ကို ၁၂၀၀ ကျပ်ရှိရာမှ ယခုအခါ ၁၈၀၀ ကျပ်ခန့်အထိ တက်သွား ကြောင်း၊ ကြက်သွန်နီ တပိဿာမှာ ၆၀၀ ကျပ်မှ ၂၅၀၀ ကျပ်ခန့်အထိ ဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။
ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင် စားဖိုဆောင်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူအသင်း ဒုဥက္ကဌ ဦးခင်ဟန်က “ ကြက်သွန်ဈေးက တက် နေတယ်။ ကုန်အ၀င်နည်းလို့။ ကြက်သွန်ချိန်ကလည်း တုံးနေပြီ။ နောက်လထဲ အသစ်ပေါ်တော့မယ်။ အခုချိန်က တုံးတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ဈေးက တက်ကို တက်မှာ။ ဒီနှစ် အထွက်နှုန်းကိုလည်း မခန့်မှန်းနိုင်သေးဘူး။ ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သက် တယ်” ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဈေးကွက် သတင်းအချက်နှင့် သုတေသနဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းမှာ ပစ္စည်းပြတ်လပ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကြောင့် မဟုတ်ပဲ၊ လယ်ဧကများ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်၍ ၀ယ်ယူသိုလှောင်မှုများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကို ကျနော်တို့ ဘက်ပိုင်းက ပြောနေတာရှိတယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ ပစ္စည်း မရှိလို့လား ပြန်စစ်တယ်၊ လှောင်လက်တို့ ဘာတို့က လုပ်ရင်တော့ ကျနော်တို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်တာပေါ့။ စီးပွားရေး သဘောအရ ပြောရတာ တော်တော်ခက်တယ်။ တချို့သူတွေက နည်းနည်းလေး အပိုအလျှံလေးတွေ ၀ယ်ထားတတ်တာ ရှိတဲ့ အလေ့အထလေးတွေကလည်း ဈေးကွက်မှာ တခါတလေ နည်းနည်း ဈေးက ဆောင့်တက်တာပေါ့နော်”ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဈေးကွက် သတင်းအချက်နှင့် သုတေသနဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်း လက်လီ ဈေးကွက်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဈေးနှုန်းများမှာ ကြက်သွန် တပိဿာလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်၊ ရွှေဘိုဆန် တပြည် ၂၅၀၀ကျပ်၊ ဖျာပုံဆန် တပြည် ၁၇၀၀ကျပ်၊ တောင်ပျံဆန် တပြည် ၁၆၀၀ကျပ် ရှိနေကာ ပဲဆီ တပိဿာလျှင် ၅၅၀၀ကျပ်၊ စားသုံးဆီဈေးမှာ တပိဿာလျှင် ၁၇၀၀ ကျပ် တွင် ရှိနေပြီး ကုန်စိမ်းဈေးနှုန်းများမှာလည်း အလားတူ မြှင့်တက်နေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပသို့တင်ပို့မှုအခြေအနေမှာလည်း အောက်တိုဘာ လ၀က်အထိ ဆန်တင်ပို့ထားသည့် ပမာဏမှာ တန်ချိန် ခုနှစ်သိန်းခွဲ ရှိပြီး၊ ကြက်သွန်နီတင်ပို့မှုမှာ တန်ချိန် ၃၈၀၀၀ ကျော်၊ ပြည်ပမှ စားသုံးဆီတင်သွင်းမှုမှာ ၃၆၀၀၀၀ကျော် ရှိကြောင်း စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ရွေးကောက်ပွဲအမီ ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြ
ဖမ်းဆီးခံထားရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ အမီလွှတ်ပေးရန် အတွက် မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ချောင်းဦးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာဈေး အရှေ့ဘက်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး "ဖမ်းဆီးခံထားရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၊ ကျောင်းသားများ၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ဝန်းရံပြည်သူများကို
ရွေးကောက်ပွဲ အမီ လွှတ်ပေးပါ" ဟုသော ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်အား ကိုင်ဆောင်ကာ နံနက် ၉နာရီမှ ၁၀ နာရီထိ တစ်နာရီကြာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတစ်ယောက် ထောင်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့ရင်တောင် ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ သန့်ရှင်းပါတယ်၊ မျှတပါတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး၊ အခုဟာက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မြောက်များစွာကို ထောင်ထဲမှာ ဖမ်းချုပ်ထားပြီးတော့မှ လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အယုံအကြည် မရှိပါဘူး" ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ဦးကျော်ဆွေ (မောင်မြေမွန်-ချောင်းဦး)က ပြောသည်။
ဦးကျော်ဆွေသည် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်က ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့မှုဖြင့် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင် နှစ်ကြိမ် ချမှတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ထောင်ဒဏ် လေးကြိမ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကရင်ပါတီများ အမှတ်တံဆိပ် ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်၍ ဒေသခံများ ခွဲခြားရန် ခက်ခဲနေ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၇မြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီ ၆ပါတီ၏ အမှတ်တံဆိပ်များသည် ကရင်အ မျိုးသားများ အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်သည့် ကျွဲချိုနှင့် ဖားစည် အမှတ်တံဆိပ်များ အားလုံး ပါရှိနေသောကြောင့် ဒေသခံများအနေ ဖြင့် ယင်းပါတီများ၏ အမှတ်တံဆိပ်များကို ခွဲခြားရန် ခက်ခဲနေသည်ဟု ဖားအံမြို့နယ်၊ နောင်လုံ ရွာသား စောခင်ဝင်းက ကေအိုင်စီသို့ ယနေ့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကရင်ပါတီတွေက များတယ်၊ အမှတ်အသားတွေလည်း သိပ်မကွာကြဘူး။ ဒေသခံအများစုက ဖားစည်၊ ကျွဲချိုတို့တွေ့ ရင် မဲပေးကြမှာပဲ။ နောက်ပြီး ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီနဲ့ အတူတူပဲလို့ ရွာမှာလာမဲဆွယ်တဲ့ ကရင်ပါတီတွေကလည်း ပြောတယ်၊ နောက် ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီက လာပြန်တော့ သူတို့နဲ့ မတူကြဘူးလို့လည်း ပြောပြန်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ တကယ် ကိုယ့်ဒေသအတွက် အမှန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပါတီကိုပဲ မဲပေးချင်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကရင်ပါတီများသည် ကျေးရွာများသို့ လာရောက် ဟောပြောမဲဆွယ် ရာတွင် ကရင်လူမျိုးအတွက် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးမည့်ဟု ပြောဆိုထားကာ ကရင်ပါတီ ၆ခုစလုံးတွင် ကရင်အမှတ်အ သားများပါသည့်အတွက် ဒေသခံများက မည်သည့်ပါတီ မဲပေးရမည်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေကြသည်ဟု စောဝင်းခင်က ဆက် ပြောသည်။
ထိုသို့ ကရင်ပါတီတိုင်းက ကျွဲချိုနှင့် ဖားစည်အမှတ်အသားများ ပါသည့်အတွက် ယင်းထဲတွင် မည်သည့်ပါတီက ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီဖြစ်သည်ကို ဒေသခံ ကရင်ပြည်သူများ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေကြသည်ဟု ယင်းပါတီ၏ ဖားအံအမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောအောင်ကျော်နိုင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ သွားရောက်တဲ့ ရွာတိုင်းလိုလိုပါပဲ။ ဒေသခံတွေက ပြောကြတယ်၊ အရင် လာရောက်တဲ့ပါတီတွေကလည်း ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီနဲ့ အတူတူပါပဲတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီပါတီတွေရဲ့ အမှတ်အသားတွေကလည်း ဖားစည်တို့ ကျွဲချိုတို့ပါတော့ အဲဒီကိစ္စ တွေပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ကျနော်လိုက်ပြီး ပြန်ရှင်းပြပေးရတယ်”ဟု စောအောင်ကျော်နိုင်က ဆိုသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲ၌ တသီးပုဂ္ဂလနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၈ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းထဲတွင် ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင်ပါတီများဖြစ်သည့် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ စည်းလုံးညီညွတ်သော် ကရင်အမျိုးသားဒီမို ကရက်တစ်ပါတီတို့ ဝင်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီနှင့် ကရင်အမျိုးသားပါတီတို့ကလည်း ကရင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အချို့တွင် ဝင်ပြိုင်သွားဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့် အဆိုပါ ပါတီများထံမှ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Prince & Princess International 2016 ပြိုင်ပွဲ အတွက် Style Plus H သင်တန်းကျောင်းတွင် နိုဝင်ဘာလ မှစတင်ကာ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
၁၆ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပမည့် Prince & Princess International 2016 ပြိုင်ပွဲ အတွက် စိတ်ပါဝင် စားသည့် သူများ Style Plus H သင်တန်းကျောင်းတွင် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ လျှောက်ထား နိုင်ပြီဟု Style Plus H သင်တန်းကျောင်းမှ မလှနုထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ၁၅ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခဲ့သည့် Prince & Princess International 2015 ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် Style Plus H သင်တန်းကျောင်းမှ အလှမောင်မယ်များကို ရွေးချယ်ပြီး စေလွှတ်ခဲ့သည်။
Prince & Princess International 2015 ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် Mini Miss Myanmar 2015 အသက် ၄နှစ်ခွဲ ရှိသည့် ချစ်ချစ်တုန် ၊ Little Miss Myanmar 2015 ရှင်းသန့်ဖြူစင်၊ Little Mister Myanmar 2015 ဇွဲသူရိန်၊ Junior Mister Myanmar 2015 လရောင်လင်း ခေါ် Thomas Tun ၊ Miss Teen Myanmar 2015 မေနန္ဒာကျော် ၊ Mr. Teen Myanmar ဟိန်းမင်းသူတို့မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
Mr. Teen Myanmar ဟိန်းမင်းသူ က Best Introduction ဆု ၊ Miss Teen Myanmar မေနန္ဒာကျော်မှ Best Party Wear ဆု၊ Little Miss Myanmar ရှင်းသန့်ဖြူစင်က Best Portfolio ဆု၊ Little Mister Myanmar 2015 ဇွဲသူရိန် က Junior Prince International ဆု၊ Junior Mister Myanmar 2015 လရောင် လင်း (ခေါ်) Thomas Tun မှ Best Pajamas ဆု၊ Mini Miss Myanmar ချစ်ချစ်တုန်မှ Asia Pacific Child Super Model for Swim wear 2015 ဆု အပြင် Talent Show တွင် မြန်မာအက၊ စက်ရုပ်အကကို အင်္ဂလိပ် သီချင်းပေါင်းပြီး (၃)မျိုးစပ် အကနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှ "Asia Child Dance Super Talent 2015" Winner ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
Prince and Princess International ပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဝတ်စုံ၊ ညနေခင်းဝတ်စုံ၊ ကျောင်းဝတ်စုံ၊ အားကစားဝတ်စုံတို့ အပြင် Talent Show၊ အင်တာဗျူး အမေးအဖြေ ကဏ္ဍများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
"အမတို့ ရွေးတဲ့အခါကျရင် ဒီတစ်ခေါက်တော့ တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး ရွေးမယ်။ လမ်းလျှောက်တာ အရမ်းတော်တဲ့သူကို တစ်ယောက် talent ပိုင်းမှာ အရမ်းတော်တဲ့ သူကို တစ်ယောက်၊ အင်တာဗျူးဖြေတာ အရမ်းတော်တဲ့သူကို တစ်ယောက် Level တစ်ခု အတွက်ကို ၃ယောက်ဆီ ရွေးချယ်မယ်။ အခု Prince and Princess Thailand ကို ဒိုင်အနေနဲ့ သွားပြီး အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာ သူတို့ဘက်က လူတွေ အရမ်းတော်တာ သတိထားမိတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီဘက်မှာ အများကြီး ပြင်ဆင်ရပါမယ်" ဟု ပြောသည်။
Prince & Princess International 2016 ပြိုင်ပွဲ အတွက်ကို Mini Miss Myanmar 2015 ကိုယ်စားပြု အဖြစ် ၃ယောက်၊ Little Miss Myanmar အဖြစ် ၃ယောက်၊ Little Mister Myanmar အတွက်ကို ၃ယောက် Junior Mister Myanmar အတွက်ကို ၃ယောက် Miss Teen Myanmar အတွက်ကို ၃ယောက်ဆီ ရွေးချယ် စေလွှတ်မည် ဖြစ်သည်။
Prince & Princess International 2016 ပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၆ မေလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ရွေးချယ်ရန် အတွက် Prince & Princess Myanmar 2016 ပြိုင်ပွဲကို၂၀၁၆ မတ်လတွင် Style Plus H သင်တန်းကျောင်းမှ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် Prince & Princess Myanmar 2016 ပြိုင်ပွဲကို ပွဲကြီးတစ်ပွဲတည်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ဘဲ Charity Pageant အနေဖြင့် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရမည့် သူများကို Miss Teen Myanmar မေနန္ဒာကျော်၊ Miss Little Myanmar ရှင်းသန့်ဖြူစင် ၊ Junior Mister Myanmar 2015 လရောင် လင်း (ခေါ်) Thomas Tun ၊ Mini Miss Myanmar ချစ်ချစ်တုန်၊ Little Mister Myanmar 2015 ဇွဲသူရိန် တို့မှ သရဖူ စလွယ်များ ပေးအပ်လွှဲပြောင်းပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
သတင်းမီဒီယာတွေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာ
တနသာင်္ရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင် အတွင်းရှိ ဘန်ချောင်းကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်မှုရှိနေသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ချက်ခြင်း ရပ်တန့်ပေးရန် ဒေသခံများနှင့် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဒေသခံများက ဘန်ချောင်းကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းတွင် အဓိက ရင်နှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေကြသည့် မေဖလားဝါး သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် ၎င်း၏မိတ်ဖက် ထိုင်းကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် East Star ကုမ္ပဏီနှင့် Thai Asset ကုမ္ပဏီတို့၏ လုပ်ငန်းများ ချက်ခြင်းရပ်တန့်ပေးရန် ဒေသခံများက တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒါက မလုပ်သင့်ဘူး။ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှ လုပ်။ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ သူတို့ကို ဖမ်းဆီးခွင့်တားဆီးခွင့် မရှိဘူး။ မေဖလားဝါးက အသိအမှတ်ပြု လုပ်နေပေမယ့် East Star ကုမ္ပဏီနှင့် Thai Asset ကုမ္ပဏီတွေကို မြန်မာအစိုးရက အသိအမှတ် မပြုထားဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ထိုင်းအစိုးရမှာ အများကြီး တာဝန်ရှိတယ်။ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ထားဝယ်ခရိုင် ကထောင်းနီကျေးရွာ ဒေသခံဖြစ်သူ စောတင်ဦးက ပြောသည်။
ဘန်ချောင်း ကျောက်မီးသွေးတွင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Orchid Hotel တွင် ပြုလုပ်ရာ၌ ထားဝယ်ခရိုင် ဒေသခံများနှင့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများက အထက်ပါကဲ့သို့ ပြောဆိုတောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒေသ၌ ဒေသခံများသည် ကွမ်းပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ကိုင်သည့် နေရာဖြစ်ပြီး သောက်ရေသုံးရေအတွက် ရေတွင်းရေကန် မရှိခြင်းကြောင့် ချောင်းရေကိုသာ မှီခိုနေရသည့် ဒေသတခုလည်း ဖြစ်သည်။
“သီးနှံအထွက်နှုန်းတွေ ကျလာတယ်။ ချောင်းကို မှီခိုနေတာ အခုချောင်းက ကျောက်မီသွေးကြောင့် ပျက်စီးသွားပြီ။ ကျောက်မီးသွေး မိုင်းတွင်းတွေမှာ ပြည့်နေတဲ့ရေတွေကိုလည်း ချောင်းထဲကို တိုက်ရိုက်သွန်တယ်။ ရေမရှိတော့ ဒီရေကိုပဲ သောက်သုံးနေရတယ်။ ဒါကို အစိုးရဌာနနဲ့ ကုမ္ပဏီက အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ဒေသခံတဦးဖြစ်သူ နော်ဒယ်ဒီးနာက ပြောသည်။
ဘန်ချောင်းရှိ သတ္တုလုပ်ငန်းများအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး လူထုပါဝင်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုစစ်တမ်း (EIA) နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြုလုပ်ပြီးသည်အထိ ရပ်တန့်ပေးထားရန်၊ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ မြေယာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်များ၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာများကို ဖြေရှင်းပြီးသည်အထိ ကုမ္ပဏီ၏ သတ္တုလုပ်ငန်းများကို ရပ်တန့်ပေးရန် တောင်းဆိုကြထားသည်။
ဘန်ချောင်း ကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် အစိုးရပိုင်းနှင့် နီးစပ်မှုရှိသည့် ဦးကျော်ဝင်း ပိုင် မေဖလားဝါး ကုမ္ပဏီက သတ္တုလုပ်ကွက်ပါမစ်ကို တရားဝင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုတော့ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် East Star ကုမ္ပဏီနှင့် Thai Asset ကုမ္ပဏီများက မေဖလားဝါး ကုမ္ပဏီ အမည်ခံဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
ဦးအောင်မောင်း(မန္တလေးမြို့တော်ဝန်) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ဒုတိယအပိုင်း
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရပ်ကွက်ထဲပြန်ရမယ့် အထူးရဲများ
ပုခုံးဒေါက် အနီရောင်ဖြစ်တာကလွဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝတ်စုံနဲ့တစ်ပုံစံတည်း မီးခိုးရောင် အင်္ကျီ၊ နက်ပြာရောင် ဘောင်းဘီတို့ကို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့၊ အသက် ၂ဝ အရွယ် ကိုကျော်ရဲလင်း တစ်ယောက် နေပူရှိန်ကြောင့် ချွေးတစို့စို့ ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း မျက်နှာကတော့ တည်ကြည်ရဲရင့်လို့နေပါတယ်။
“ကျနော်က ရဲဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ ဒီနှစ် ၁ဝ တန်းကို အောင်အောင်တော့ ပြန်ဖြေပြီးရင် ရဲထဲကိုပဲ ပြန်ဝင်မယ်။ အခုအကြိမ်ကတော့ အတွေ့အကြုံရှာတဲ့သဘောမျိုးပဲ” လို့ ကိုကျော်ရဲလင်းက သင်တန်းခဏနားစဉ်မှာ Myanmar Now ကို ပြောပြပါတယ်။
အထူးရဲများက တစ်ပတ်ကြာ သင်တန်းတက်ထားတဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့အထိ မဲရုံတစ်ရုံမှာ တဦးကျစီ တာဝန်ယူရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့လည်း မတ်လ ၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ ပြည်သူတွေ ကို လက်ပတ်နီဝတ်တွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အခါမှာ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့ လက်ပတ်နီဝတ်တစ်ဦးက ဆန္ဒပြကျောင်းသူတဦးရဲ့လည်ပင်းကိုနောက်ကနေ သိုင်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့ပုံက မီဒီယာမှာ ဖော်ပြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ လက်ပတ်နီတွေကို တာဝန်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မြို့နယ် အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ဝေက ဆိုပါ တယ်။
အထူးရဲတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ တက်ကြွနေသူ တဦးကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ နှင်းဆီကုန်း (က) ရပ်ကွက်နေ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် ဦးစောသိန်းဖြစ်ပါတယ်။
“ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးတို့၊ အာဏာပိုင်တို့နဲ့ ဒီတကြိမ်က ပထမဆုံးတွဲလုပ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ကျနော်က ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးတွေပဲ လုပ်ခဲ့တာ၊ တခါမှ တိုင်းပြည်အတွက် မလုပ်ခဲ့သေးဘူး၊ ဒီတကြိမ်တော့ အတွေ့အကြုံရအောင် လုပ်ကြည့်မှပဲဆိုပြီး ဝင်လုပ်တာ” လို့ ဦးစောသိန်းက ဆိုပါတယ်။
“ကိုယ့်ကြောင့် ပြဿနာမကြီးထွားဖို့လိုတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်တွေကို အထူးရဲကိုယ်တိုင်က ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန် နာမည်ပျက်စရာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အရေးပြန်ယူခံရမှာဖြစ်တယ်”
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အထူးရဲစစ်ရေးနည်းပြ၊ ရဲအုပ်သက်ဦးကတော့ အထူးရဲတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ရပ်ကွက်ထဲပြန်နေကြရမှာဖြစ်ပြီး အထူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူတဦးရဲ့ သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
“သူတို့မှာ တစုံတဦးကို ဖမ်းဆီး ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ မရှိပါဘူး” လို့ ရဲအုပ်က ပြောပါတယ်။
(ယခုဆောင်းပါးသည် ရန်ကုန်အခြေစိုက် Myanmar Now သတင်းဌာန သတင်းထောက် ထက်ခေါင်လင်း၏ ဆောင်းပါးဖြစ်ပြီး www.myanmar-now.org မှတဆင့် ကူးယူဖော်ပြသည်)
ဦးအောင်မောင်း(မန္တလေးမြို့တော်ဝန်) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းပထမပိုင်း
ပြောင်းလဲရန် ကွန်မြူနစ်စနစ်သာ ကျန်ဟု ပြောဆိုမှု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဝေဖန်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံအား တပ်မတော်အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည့်အတွက် နောက်ထပ် ပြောင်းလဲရန်မှာ ကွန်မြူနစ်စနစ်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောဆိုခဲ့ရာ ဝေဖန်မှုများ ခံနေရသည်။
ယမန်နေ့ကပြုလုပ်သည့် ငပုတောမြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ကွင်းကျေးရွာ၌ပြုလုပ်သည့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က “တပ်မတော်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်ကနေပြီးတော့ ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရစနစ်နဲ့ လွှတ်တော်တို့ အစိုးရတို စသည်အားဖြင့် ဒီစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျနော်တို့ ပြောင်းပြီးပြီ။ နောက်ထပ် ဘာမျိုးများ ပြောင်းချင်သေးလဲ။ နောပ်ထပ် ပြောင်းဖို့ကတော့ တခြားမရှိဘူး။ ကွန်မြူနစ်ပဲ ရှိတော့တယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
၎င်း၏ သမ္မတ သက်တမ်းတလျှောက် မွေးရပ်ဇာတိ ငပုတောဒေသသို့ ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ခဲ့သည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်များက သမ္မတပုံပါ ပြက္ခဒိန်များ ကိုင်ဆောင်၍ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ငပုတောမြို့မှ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ဖြင့် ဥသျှစ်ကွင်း ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံဟောပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကြွေးကြော်သံဖြစ်သည့် “ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ” ဟူသည့် စကားရပ်အပေါ်ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့က ပြည်သူအများလိုလားတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြောင်းပြီးပြီ။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ။ ကျနော်တို့က ပြောင်းပြီးပြီ။ ပြောင်းပြီးတဲ့စနစ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင် ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လုပ်သွားပေးမယ်” ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦး ဖြစ်သည့် ကိုရဲမင်းဦးက “ကွန်မြူနစ်အစိုးရတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတွေနဲ့ ပလဲနံပ သင့်လွန်းတဲ့ သူတွေက ပြည်တွင်းမှာ အင်အားမရှိတော့တဲ့ ဗကပ နဲ့ ပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ ၁၉၈၈ ကတည်းကပါပဲ။ ဓာတ်ပြားဟောင်း ပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခေတ်တွေ ပြောင်းကုန်ပါပြီ။ အဲဒီ သီချင်းဟောင်းကြီးကို လူတွေ နားမထောင်ကြတော့ဘူးဗျ” ဟု ဆိုသည်။
လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင်လည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောဆိုချက်အပေါ် ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
တသီးပုဂ္ဂလ အမတ်လောင်း ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက “သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာတော့ ကျမ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ပြောတဲ့သူပဲ သိလိမ့်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၎င်းတို့အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် အမွှန်းတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ “ကျနော်တို့လိုပဲ တချိန်တည်းမှာ ဒိမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေ၊ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့အထိ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မပြောင်းနိုင်ဘဲ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သွေးထွက် သံယိုမှုတွေ၊ ဗုံးတွေ၊ မိုင်းတွေ နေ့စဉ်ကွဲနေ၊ နေ့စဉ် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ တိုင်းပြည်တွေက ပျက်နေပြီ။ လူတွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး ထွက်ပြေးနေရတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ တလှမ်းချင်း သတိထားပြီးတော့ ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့လို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွေးထွက်သံယို မရှိဘဲနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်” ဟု ဆိုသည်။
တိုင်ပြည်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရသည်က အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ငပုတောခရီးစဉ်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
“အခုတော့ လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတာ အားလုံးသိပါတယ်နော်။ အခု အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့ရှိတာမှာ ၈ ဖွဲ့နဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဖို့ဆိုပြီး လက်မှတ်တွေ ထိုးပြီးပြီ။ မကြာခင်မှာ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ထိုးမယ်။ တိုင်းပြည်လုံး သေနတ်သံတွေ ချုပ်ငြိမ်း ပြီးတော့မှ ပြည်သူတွေ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေရထိုင်ရအောင် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို ကြိုးပမ်းပြီးတော့ လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ငပုတောမြို့သို့ လာရောက်ခဲ့သည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ မအူပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးသိန်းညွန့်နှင့် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်တို့လည်း လိုက်ပါလာခဲ့သည်။
အဖွဲ့ချုပ် ကုိုယ်စားလှယ် ဦးနုိုင်ငံလင်း အသက်အန္တရာယ် မစုိုးရိမ်ရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲဝရုန်းသုံးကားဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူသတိပေး
လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ကျင်းမမည့် သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲများ ယုံကြည်လောက်သော မဲပေးမှုတစ်ခုအတွက် မျှော်လင့်ထားသည့် အခြေအနေများဖြစ်မလာပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀ရုန်းသုံးကားအခြေအနေများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၂၉ တွင် သတိပေးလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ရှောင်ခွာလာစဉ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲများက ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း အလွတ်လပ်ဆုံးနှင့် အမျှတဆုံးဖြစ်မည်ဟု ရှုမြင်ထားသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီလီးက စိုးရိမ်စရာများစွာကို တင်ပြခဲ့သည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒါဇင်ပေါင်းများစွာ အရည်အချင်းမပြည့်မီဟုဆိုကာ အပယ်ခံရခြင်း၊ ယခင်က ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးခဲ့သူထောင်ပေါင်းများစွာ မဲပေးခွင့် ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်များလည်း တားဆီးခံခဲ့ရသည့်အပြင် ခြိမ်းခြောက်မှုများလည်း ကျယ်ပြန့်စွာရှိနေသည်ဟု လီကဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များမှာ ယုံကြည်လောက်၍ တရာဝင်ဖြစ်ကြောင်း ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံခြင်းမရှိပါက ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလနှင့် သမ္မတသစ်ခန့်အပ်ရေးနှင့် အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရေးအကြို ကာလတို့တွင် မတည်ငြိမ်မှုနှင့် တင်းမာမှုများရှိလာနိုင်သည်ဟု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၅၀မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပယ်ဖျက်ခံရပြီး ၄င်းတို့အနက်အများအပြားမှာ တည်ငြိမ်မှုမရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဖြစ်သည်ဟု တောင်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ပါမောက္ခနှင့် လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သူ လီကပြောသည်။
ယင်းကိုယ်စားလှယ်များယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းမှာ နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၄င်းတို့၏မိဘများမှာ နိုင်ငံခြားသားပတ်စ်ပို့များကိုင်ဆောင်ထားသူများဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခနှင့် ထောက်ပို့ပြသနာကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော မကြာသေးမီက ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် တရုတ်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ရွေးကောက်ပွဲများ ယုံကြည်နိုင်သည့် အနေအထားဖြစ်စေရန် သော့ချက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများရှိနေသည်ဟုလည်း ၄င်းကပြောသည်။ "မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ ဒါက တကယ့် သမိုင်းဝင်ကာလတစ်ခုပါ"ဟု လီကပြောသည်။
"ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းချင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အများအပြားကတော့ ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး"ဟု၎င်းကဆိုသည်။ ယခုသီတင်းပတ်တွင် လီသည် ၄င်း၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ တင်ပြခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသို့ ဦးတည်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် တိုးတက်မှုများ ရှိစေရန် တောင်းဆိုသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန် ညီလာခံက စီစဉ်ထားသည်။
ရွေးကောာက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး မုံရွာမှာ အနုပညာရှင်တွေ ဖျော်ဖြေ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ပြိန်းချောင်းကျေးရွာ ရွှေပါရမီ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ဒေသခံ ရွာသားများ၏ စုပေါင်း ဆွမ်းအလှူတခုတွင် ရခိုင်ပြည် လွှတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(ALP/ALA) စစ်ချီတေး သီချင်းခွေကို ဖွင့်ခဲ့ရာမှ ရွာသား ၂ ဦးကို တပ်မတော်မှ ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ပြိန်းချောင်းကျေးရွာအနီးတွင် အခြေစိုက်ထားသည့် အမှတ် ၃၇၇ အမြောက်တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူးသည် ပြိန်းချောင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ မုန့်လှူရန် လာရောက်စဉ် ရွေပါရမီကျောင်းတိုက်မှ (ALP/ALA) စစ်ချီတေး သီချင်းသံကိုကြားရာ တပ်ဖွဲ့ဝင် စစ်သည် ၂၀ ခန့်ဖြင့် ၀ါယာကြိုးများကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး Sound Box များ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ဗီဒီယိုစက်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း၊ ရွာသား ၂ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း ရွှေပါရမီ ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးဝရသာမိက ဧရာဝတီသို့ မိန့်သည်။
ဦးဝရသာမိက“ရွာက ကလေးတွေက ALP သီချင်းခွေကို ဖွင့်မိတယ်ပေါ့။ ဒါကို အမြောက်တပ်က တပ်ရင်းမှူးက လာပြီး အကြမ်း ဖက် တဲ့ အတိုင်းပဲ။ Sound Box တွေကိုလာပြီးတော့ ကြိုးတွေကို ဆွဲငင်ပစ်တယ်။ Sound Box တွေကိုလည်း ယူတယ်။ ရွာကကလေး ၂ ယောက်ကိုလည်း ဖမ်းသွားကြတယ်။ ကိုယ်တော်နဲ့ ဒကာကြီး ၆ ယောက် သွားပြီး မေတ္တာရပ်ခံတော့ လုံးဝမရဘူး။ တရားစွဲမယ်ဆိုပြီး ရဲကို အမှုစွဲတင်ဖို့ ပြောတယ်။ ကလေး ၂ ယောက်ကိုလည်း အချုပ်ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ အမှန်က ကလေးတွေကို မင်းတို့ နောက်တခါ မလုပ်နဲ့။ ဒီအခွေကို မဖွင့်နဲ့ဆိုပြီး အခွေကို သိမ်းသွားလည်း ဖြစ်တာပဲ”ဟုလည်း မိန့်ကြားသည်။
ALP/ALA စစ်ချီတေး သီချင်းခွေ ဖွင့်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြိန်းချောင်းကျေးရွားသား ၂ ဦးကို အပေါက်ဝ ရဲစခန်းတွင် ခေတ္တချုပ်နှောင် ထားခဲ့ရာ လက်ရှိအချိန်တွင် အာမခံနှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ALP/ALA သည် အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်စဲကြောင်း သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထားသော တရားဝင် အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်သည့်အတွက် စစ်ချီတေး သီချင်းဖွင့်သော အမှုသည် နှစ်ဘက် ပြေလည်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ စစ်တပ်မှ လုပ်ဆောင်ရခြင်းသည် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှု မရရှိသေးသည့် ရက္ခိုင့် တပ်မတော်(AA)၏ စစ်ချီတေးသီချင်းနှင့် မှားယွင်း၍ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ALP/ ALA အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်သူ ခိုင်အောင်ဇံဖြူက ပြောသည်။
ခိုင်အောင်ဇံဖြူက“အဲဒီအမှုက ပြေလည်မှု ရရှိသွားပြီလို့ သိရတယ်။ သူတို့က AA တေးသီချင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဖွင့်နေတယ်ဆိုပြီး လုပ်တာ။ နောက်မှ ALP သီချင်းမှန်းသိတော့ ALP ဆိုတော့ ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ ပြန်သွားလိုက်ပါ၊ ဆိုပြီးတော့ လွှတ်လိုက်ပြီ လို့ သိရပါတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
ALP/ALA သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ကို ပြည်နယ်အဆင့် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျောက်တော်မြို့ တွင်ဆက်ဆံရေးရုံးတခုကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း၊ လက်ရှိ အချိန်တွင် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်(NCA)ကို သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ALP ပါတီကို ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နယ်မြေ၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ လက်အောက်တွင် ရခိုင် ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ALA ရှိသည်။
ALA ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထူထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် ထိုင်း နယ်စပ်တို့တွင် အခြေစိုက် လှုပ်ရှားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည် ၄ ထောင်လောက် အကူအညီ လုိုအပ်
ဒီချုပ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဓါးခုတ်ခဲ့သူ ၃ဦး တရားရုံးထုတ်
ပစ်ခတ်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး ရန်ကုန်၌ ကျင်းပနေ
အပစ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးကြပြီးနောက် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် ပစ်ခတ်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ Joint Monitoring Committee (JMC) အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂၉ မှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပနေသည်။
အစည်းအဝေးတွင် JMC ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ဒေသန္တရအဆင့်ဟူ၍ အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းကြမည်ဟုသိရသည်။ လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ရမည့် ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရဦးမည်။ လတ်တလောတွင် JMC ၌ အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ဝ ဦးနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ဝ ဦး ပါဝင်ကြ သည်။
ထပ်တိုး အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တစ်ဘက်စီမှ ၃ ဦး စီ ရွေးချယ်တင်သွင်းရန် ယေဘုယျသဘောတူထားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) ကို အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့တို့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် တွင် နေပြည်တော်၌ လက်မှတ်ထိုးကြသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် မွန်းလွဲပိုင်းမှ စ၍ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်အထိ နေပြည်တော်၌ပင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပစ်ခတ်မှုရပ်စဲရေးပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ Joint Monitoring Committee (JMC) နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ Union Peace Dialogue Joint Committee (UPDJC) တို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ အစည်းအဝေးသို့ အစိုးရဘက်မှ တက်ရောက်သူများထဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦး၊ တပ်မတော်အရာရှိ ၅ ဦး၊ MPC မှ ၄ ဦးဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များဘက်မှ NCA လက်မှတ်ထိုး ထားသည့်အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့မှ KNU နှင့် RCSS နှစ်ဦးစီနှင့် ကျန် ၆ ဖွဲ့မှ တစ်ဦးစီဖြစ်သည်။ NCA စာချုပ်သည် လတ်တလောတွင် ယုံကြည်ရမှုအနေအထား မဟုတ်သေးသော်လည်း JMC အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့ပြီး၊ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများနှင့် နှစ်ဘက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ သတ်မှတ် ပြီးနောက် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာသူများပါဝင်လာချိန်တွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း စိတ်ချရမည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စိတ်ချနိုင်ရမည့် အချိန်သည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲများ ပြုလုပ်ပြီး နှစ်ဘက်သဘောတူညီမှုများရချိန်ဖြစ်သည်ဟု RCSS မှ အကြံပေး ခွန်ဆေကျိုင်ယင်က မြန်မာ့သတင်းစဉ်အား ဖြေကြားထားသည်။
JMC အစည်းအဝေးအား အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၃၁ တို့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပကြရန်လျာထားသည်။
မြ၀တီခရိုင် ကျေးရွာတွေမှာ ပယ်မဲ မဖြစ်စေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပေး
နိုင်ငံခြားမှာ ထူးခြားတဲ့ အလုပ်မျိုး သွားလုပ်သူ
နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာတွေ အလုပ်သွားလုပ်ကြတာ အလုပ်အကိုင်အမျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန် ၊အင်ဂျင်နီယာ၊ စာရင်းအင်း ပညာရှင်က အစ အိမ်ဖော်အထိ အမျိုးစုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ တွေးထင်ကြည့်မိမှာ မဟုတ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ခဲ့သူ တယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အနာကြီးရောဂါသည်တွေ အများစုနေထိုင်တဲ့ မတ္တရာမြို့နယ် နံ့သာမြိုင်ကျေးရွာမှာ သူ့ကို တွေ့ရတာပါ။
ခြံဝင်းထဲက ကွပ်ပျစ်လေးတခုပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အမျိုးသားကြီးတယောက်က ရေဒီယိုနီနီရဲရဲအသေးစားလေးတခုကို လိုင်း ရှာရင်း လျှောက်ကလိနေတယ်။ တကိုယ်လုံးမှာ အထူးခြားဆုံးကတော့ တခေါင်းလုံးက သူ့ဆံပင်တွေ ဖြူဖွေးနေတာပဲ။ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်လုံး ဘယ်လောက် ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရသလဲဆိုတာ သက်သေပြ နေသယောင်။ မျက်နှာကတော့ ကြည်နေတယ်။ လောဘ ဒေါသမာန် မာနတွေ တော်တော်နည်းနေတဲ့မျက်နှာ အေးပြီး ကြည်နေတယ်။ သူက အသက်၇၀ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ရင်(အမည်လွှဲ) ပါ။
ဦးကျော်ရင်ရဲ့ပုံစံကို ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ဘ၀ကို အေးအေးသာသာလေး ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ် သူဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တခုလုံးကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို ပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်းလှပါ တယ်။ ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ သာမာန်လူကောင်းတယောက်အတွက် တဆ ရုန်းကန်ရရင် ဦးကျော်ရင်ဟာ နှစ်ဆရုန်းကန်ခဲ့ရ တယ်။ ပိုပင်ပန်းခဲ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဦးကျော်ရင်ဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဖြစ်တဲ့အပြင် လူအများရဲ့ရှောင်ဖယ်ခြင်းကို ခံကြရတတ်တဲ့ အနာကြီးရောဂါသည်တယောက်လည်း ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သူများတွေအတွက် အပူတပူဆိုရင် သူ့မှာ အပူနှစ်ပူ ကို တပြိုင်နက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဦးကျော်ရင်ရဲ့ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေမှာ စံနမူနာ ယူချင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။
ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် အနာကြီးရောဂါဖြစ်နေရင်းတောင် ဆိုက်ကားနင်း၊ အုတ်သယ်၊ သဲထမ်းတာတွေ လုပ်ခဲ့သလို နိုင်ငံရပ်ခြားတွေအထိကို သွားရောက်ပြီး တောင်းရမ်းတာတွေလည်း လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဦးကျော်ရင်ကို မန္တလေးမြို့ မင်းတဲ အီကင်းရပ်မှာ မွေးပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့အဖေရဲ့ ရွာဖြစ်တဲ့ မိတ္ထီလာဘက်ကို ရွှေ့ပြောင်း နေ ထိုင်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီမှာ မိဘတွေရဲ့ နှမ်းစိုက် တောင်သူအလုပ် ကူလုပ်ပေးရာကနေ လက်ကို တံစဉ် ရှတယ်။ ဒီက ပိုးဝင်ရာက အနာ ကြီးရောဂါစဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သူက ယူဆတယ်။ သူ့အသက် (၇)နှစ်သားအရွယ်မှာ မျက်နှာပေါ်မှာ အဖြူကွက်လေး ပေါ် လာတယ်။ အဲဒီအဖြူကွက်လေးကို ရွာက ဘကြီး ဘုန်းကြီးက စုတ်ထိုးပေးတယ်။ မျက်စိတွေ၊ ပါးတွေ၊ နှုတ်ခမ်းတွေက အကြောတွေ ကလာပ်စည်းတွေ သေပြီး ပျက်စီးကုန်ခဲ့တာ။ ခုချိန်ထိပဲ။ သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ညာဘက်မျက် လုံး၊ ပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ တမျိုးပဲ။ ပုံမှန် လူကောင်းနဲ့ မတူဘူး။ အကြောတခုခု ထိထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ၁၁နှစ်သားအရွယ်မှာ မန္တလေးကို သူပြန်လာတယ်။ ဒီပုံအတိုင်း မန္တလေးမှာ နေလာရင်းကနေ ရောဂါ အခြေ အနေဟာ တဖြည်းဖြည်း ဆိုးလာတာကြောင့် ၆၂လမ်းနဲ့ ၃၅လမ်းထောင့်ဝန်းကျင် တ၀ိုက်က ခရစ်ယာန် သီလရှင်တွေ ဦးစီးတဲ့ စိန်ဂျွန်းအနာကြီးရောဂါဆေးရုံကို တက်တယ်။ ဆေးရုံတက်ရင်း ဆေးရုံဝန်းကျင်က အနာကြီးရောဂါသည်တွေ စုနေတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာပဲ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။
အဲဒီတုန်းက အနာကြီးရောဂါဆေးရုံဝန်းကျင်မှာ အကောက်တဲ၊ ဆိတ်သဲကုန်း၊ နဂါး၊ ဥယျာဉ်တန်း၊ ၀က္စလီ ရပ်ကွက် ဆိုပြီး အနာကြီး ရောဂါသည်တွေ စုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး ၅ ခုရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံမှာ နှစ်နှစ်တက်ပြီးနောက် မှာ သူ့ဘ၀ကြီးကို သူအားမရတော့ဘူး။
ဘာမှ တက်လမ်းလည်းမရှိဘူးဆိုပြီး ဆေးရုံက ဆင်းတယ်။ အုတ်ကား၊ သဲကားတွေမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်၊ ဆိုက်ကား နင်းတယ်။ ရသမျှနည်းနဲ့ ငွေရှာတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ရောဂါ သိပ်မဆိုးသေးခင် အချိန်တွေပေါ့။ ဘယ်လက်လက်နဲ့ ဘယ်ခြေချောင်းလေးတွေ ပြတ်တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ရောဂါက တဖြည်းဖြည်း ဆိုးလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခြေ ထောက်ကို ရှူးဖိနပ်စီး၊ လက်ကို အ၀တ်လေးနဲ့ အုပ်ပြီး ဆိုက်ကားနင်းတယ်။ စက်ဘီးနဲ့ လမ်းတကာ လျှောက်သွားပြီး အထည်ရောင်းတယ်။
အဲဒီလိုတွေ လုပ်ပြီး ငွေလေးစုမိဆောင်းမိ ရှိလာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အိမ်မှာပဲ အရက်ပုန်းချက်တော့တယ်။ ဦးကျော်ရင် တို့စုနေကြတဲ့ ရပ်ကွက်က ရောဂါသည်အများစုဟာ သာမာန်လူကောင်းတွေလို အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတာကြောင့် တောင်းရမ်းစားသောက်ပြီးမှ ရတဲ့ငွေနဲ့သာ ဘ၀ရပ်တည်နေကြရတယ်။ တောင်းရမ်းတာအပြင် သူတို့ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ် တခုကတော့ အရက်ချက်တာပေါ့။ သူတို့အိမ်တွေထဲမှာ အရက်ချက်ကြပြီး မြို့ထဲက အရက်ဆိုင်တွေကို သွားပို့ ကြရတာ ပါ။
နောက်ပိုင်း ၁၉၉၀ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် လက်ထက်မှာတော့ ဒီအနာကြီးရပ်ကွက်တွေဟာ မန္တလေး မြို့ကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်၊ ယုတ်လျော့စေတယ်ဆိုပြီး မတ္တရာမြို့နယ်ထဲက နံ့သာမြိုင်စခန်းကို ပြောင်းရွေ့ ပစ်ခဲ့တယ်။ နံ့သာမြိုင်စခန်းမှာ လူနာတဦးအတွက် ခြံဝိုင်းတ၀ိုင်းနဲ့ စိုက်ပျိုးဖို့ မြေတဧကစီ ပေးပြီး ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက နံ့သာမြိုင်စခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်းက ၄၅၀ ကျော် ပါတယ်။ စခန်းနေရာဟာ ငှက်ဖျား ပေါ တာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခါစ ပထမနှစ်မှာပဲ ငှက်ဖျားမိပြီး လူတွေ ဆုံးကြတာ အများကြီးပဲ။ ငှက်ဖျားမိတဲ့အထဲ ဦးကျော်ရင် ကတော့ မပါခဲ့ပါဘူး။
အနာကြီးရောဂါသည်တွေရဲ့ မူလလက်ရင်း နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတော့ မြို့မြေကွက်ရိုက်ပြီး ခွဲဝေတယ်။ ယခု အချိန်မှာ တော့ အဲဒီနေရာ မြေတကွက်ဟာ သိန်းပေါင်းသောင်းချီပြီး တန်ကြေးဖြစ်နေပါပြီ။
ဦးကျော်ရင်က ရေနံ့သာနံ့သာမြိုင်စခန်းမှာပဲနေရင်း နိုင်ငံခြားကိုလည်း ထွက်ပြီး စီးပွားရှာ (တောင်းရမ်း) ခဲ့ဖူးတယ်။ ရေနံ့ သာ စခန်းကနေ နိုင်ငံခြားကို သွားရောက် စီးပွားရှာသူတွေ အယောက်သုံးဆယ်ကျော် လေးဆယ်နီးပါးရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ရင်က သူ့ဘ၀မှာ အမှတ်တရ အရှိဆုံးအချိန်တွေကတော့ နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီး တောင်းရမ်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ လို့ လက်ထဲက ရေဒီယိုလေးကို ဟိုပွတ်ဒီပွတ်လုပ်ပြီး ပြောတယ်။
ဦးကျော်ရင်ပြောတဲ့ နိုင်ငံခြားဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ နယ်မြေချင်း ထိစပ်နေတဲ့ ယိုးဒယားနိုင်ငံတို့၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့ ဘက်ကိုပါ။ ဦးကျော်ရင် နောက်ဆုံးအကြိမ်သွားခဲ့တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကပါ။ ဦးကျော်ရင် နေထိုင်နေတဲ့ နံ့သာမြိုင်ရွာကနေ နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြီး တောင်းရမ်းရှာဖွေစားသောက်ကြသူ ပမာဏဟာ ပျမ်းမျှ အယောက်၃၀ လောက်ရှိ တယ်။ မိုးကုန်လို့ ဆောင်းဦး အ၀င်က သွားလိုက်ရင် နောက်နှစ်မိုးဦးအစမှ ပြန်လာကြတော့တာပါပဲ။ မိုးရာသီကိုတော့ ရွာ မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ဖြတ်သန်းလေ့ရှိကြတယ်။
သွားပြီဆိုရင် ကားနဲ့ လေယာဉ်နဲ့ သွားကြတယ်။ အဲဒီလို ခရီးသွားနေတုန်းမှာတော့ အ၀တ်အစားကောင်းတွေ ၀တ်ရတာ ပေါ့။ ဖုံးသင့်တာတွေ ဖုံးဖိရတယ်။ သားသမီး၊ မိတ်ဆွေ လူကောင်းတွေနဲ့ အသာလေးရော လိုက်သွားကြရတယ်။ ခရီးစရိတ် တွေက တခေါက်ခေါက်ဆိုရင် သိန်းချီကုန်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဟိုမှာပြန်ရတာနဲ့ ယှဉ်လိုက်တော့လည်း ဘာမှမဟုတ် တော့ပြန်ဘူး။ သူတို့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ တွက်ခြေကိုက်တယ်။ စုမိဆောင်းမိကြတယ်။ နိုင်ငံခြားကို ထွက်ရှာကြပေမယ့် လည်း ဦးကျော်ရင်လို စုမိဆောင်းမိသူကတော့ တော်တော့်ကို နည်းမယ်။ တချို့က နိုင်ငံခြားကို ထွက်ရှာကြတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း ဟိုမှာ အပျော်အပါးလောင်းကစားတွေလုပ်ပြီး ငွေတွေ သိပ်မစုမိကြဘူး။ စုမိရင်လည်း အနည်းအကျည်း လောက် သာစုမိတယ်။ ဦးကျော်ရင်ကတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရသလောက်ရှာတယ်။ ကျစ်နေအောင်စုတယ်။ လှူသင့်တာ လှူ တယ်။
သူထွက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်ဆုံးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်က သွားခဲ့တဲ့ ယိုးဒယား ခရီးစဉ်ပါတဲ့။
အဲ့ဒီအချိန်က ဦးကျော်ရင်ဟာ အိမ်တွင်းရေး အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် တခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ယိုးဒယားဘက်ကို သွားခဲ့တယ်။ တံတားဦးလေဆိပ်ကနေ တဆင့် တာချီလိတ်ကို လေယာဉ်ပျံနဲ့သွားတယ်။ “လူတွေမှာ အ၀တ်အစားက အဓိကပဲ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်သွားတော့ လေးစားသမှုတောင် ပြုခံရသေးတယ်။ တရားကျဖို့လည်း ကောင်းပါတယ် ”လို့ ဦးကျော်ရင်က တချက်ရယ်လိုက်ရင်း ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရယ်သံထဲမှာ နာကြည်းသံ နည်းနည်းစွက်နေတာသိ သာတယ်။
တာချီလိတ်က တဆင့် ယိုးဒယားဘက်ကို ၀င်တယ်။ တခါတလေ တာချီလိတ်ဘက်မှာလည်း အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက်ကို ကူးလိုက်သန်းလိုက် လုပ်ပြီးတောင်းရမ်းတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးကျော်ရင်တို့လို ဘ၀တူတွေကလည်း အများကြီးပဲ။ သူတို့တွေနေဖို့အတွက် မိုးကာရွက်ဖျင်တဲအိမ်လေးတွေ လပေးငှားကြရတယ်။ ထမင်းကိုလည်း လပေးစားကြရတယ်။ ဒါကြောင့် နေရေးစားရေးက အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ “ဒါပေမယ့် တောင်းရမ်းတဲ့အခါမှာတော့ ယူနီဖောင်းလဲရတာပေါ့” လို့ တချက်ရယ်လိုက်ရင်း ပြောပြန်တယ်။ ဒီတခါမှာတော့ စိတ်လိုလက်ရ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရယ်တာပါ။ အခုလို အတွေ့အကြုံ တွေ ပြန်ပြောပြရတာကိုလည်း တက်ကြွနေတယ်။
ဒီခရီးစဉ်မှာ ၇ လကြာအောင် နေခဲ့တယ်။ ၇လအတွင်း ငွေကျပ်သိန်းခြောက်ဆယ်ကျော် စုဆောင်းနိုင်မိခဲ့တယ်။ လူတွေ ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေး၊ မုန့်ဖိုးလေးလောက်သာ ပေးကမ်းကြပေမယ့် မြန်မာငွေနဲ့ ပြန်တွက်လိုက်တော့ အများကြီး ဖြစ်သွားတာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို လပိုင်းလေးအတွင်းမှာ အခုလို ငွေများစွာ စုမိဖို့ကတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ သူက တော်လို့သာ အခုလို စုနိုင်ဆောင်းနိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးကျော်ရင်က ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားကြီး ပြောတယ်။
သူသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေက ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရသလို ပိုက်ဆံကုန်ပေါက်၊ အပျော်အပါးတွေကလည်း များလွန်းလှတဲ့ နေရာတွေပါ။ မိန်းမကိစ္စ၊ လောင်းကစားကိစ္စတွေကြောင့်လည်း သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်ဆို ငွေမစုမိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ အ၀တ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်လိုက်ရင် ဘယ်ကိုသွားသွား ပျော်လို့ရတာကြောင့်ပါ။
သူစုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ငွေသိန်းခြောက်ဆယ်ထဲမှာ လှူတာတန်းတာတွေ မပါသေးပါဘူး။ သူအလုပ်လုပ်နေရင်း တာချီ လိတ်ဘက်မှာ တရားပွဲတခုနဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ အလှူဖလားထဲကို ဘတ်သုံးထောင် (ငွေကျပ်တသိန်းခန့်) လှူခဲ့တယ်။ တရားနာပရိ သတ်တွေကို အကြောလိမ်းဆေးတဘူးဆီ ကမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ အလှူခံဖြတ်ပိုင်းရေးတဲ့အခါ လှူဒါန်းသူ အမည်နေရာမှာတော့ သူ့နာမည်အစား သူ့ကို ပေးကမ်းခဲ့ကြတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ ဆိုပြီး ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အလှူငွေ လက်ခံတဲ့သူတွေက သူ့ကို အရမ်းချီးကျူးသွားကြပြီး ‘အဘ. အဘ’ နဲ့ကို ဖြစ်သွားကြတာပဲတဲ့။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ တော်တော်ပီတိဖြစ်နေပြီး ကိုယ်ပါ တက်ကြွလာသလို ခံစားရတယ်။ သူ့စကားသံတွေကလည်း အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း တက်ကြွ လာတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ဦးကျော်ရင်ဟာ အသက်၇၀ကျော်လာပါပြီ။ သားသမီးတွေ အားလုံးကလည်း အဝေးမှာ အခြေကျ နေကြပြီ။ သူတယောက်တည်းပဲ တရားလေးနာလိုက်၊ ရေဒီယိုလေးနားထောင်လိုက်နဲ့ ဘ၀ကို အေးအေးဆေးဆေးဖြတ် သန်းနေပြီ။ ဒီလို အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်ကလည်း တကယ်တော့ သိပ်မကြာလှသေးပါဘူး။ သူ့ဘ၀ မှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေကလည်း အများသားကိုး။ ဒီနေ့အချိန်ထိ သူ့ကို ပေးကမ်းတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးကို “အဘ လိုအင် ဆန္ဒ ပြည့်သလို သူတို့လည်း လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ပါစေဆိုပြီး” နေ့စဉ် မေတ္တာပို့ပေးနေဆဲပါတဲ့။
အခုချိန်မှာဆိုရင် ဦးကျော်ရင်ဟာ ဘ၀တလျှောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲအတားဆီးတွေကို အေးအေးသက်သာပဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိအနေအထားမှာ သူ့ဘ၀ဟာ တော်တော့်ကို တည်ငြိမ်အေးဆေးနေပါပြီ။
ဟင်္သာတမြို့ပေါ် စစ်တပ်တွင်း မဲပေးနိုင်သူရဲ့ သုံးပုံတပုံ ကြိုတင်မဲ ပေးမည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ် ဓါးဖြင့်ခုတ်ခံရသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ အမတ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာ လုံးဝမရှိဟု ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ခွဲစိတ်မှုအပြီး အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ထားဝယ်တွင် မလုံခြုံသည့် ကြိုတင်မဲပုံများကို ပြင်ဆင်
ထားဝယ်မြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ခရီးသွားဖို့ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ကြိုတင်မဲပေးတဲ့နေရာမှာ ရပ်ကျေးကော်မရှင်ရုံးတွေရဲ့ မဲပုံးအနေအထား မလုံခြုံတဲ့အတွက် ကော်မရှင်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကြိုတင်မဲပုံး လုံခြုံမှုမရှိကြောင်း မဲရုံစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေက တင်ပြလာတာကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် ညနေ ၃ နာရီမှာ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလွင်နဲ့ ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ အီးယူအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒါကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ကြိုတင်မဲမပေးဖြစ်တော့ဘဲ ဒီနေ့မှာတော့ ခရီးသွားဖို့ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ကြိုတင်မဲ စပေးနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ တပ်မတော်သားမဲဆန္ဒရှင် ၂၈၅၀ အပါဝင် မဲဆန္ဒရှင် ၁၀၇၈၀၁ ဦး ရှိပြီး မဲရုံပေါင်း ၁၁၇၀ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် မြို့နယ်တွေဆီကို ဖြန့်ဖြူးပေးလိုက်တဲ့ ကြိုတင်မဲပုံးတွေဟာ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက် မဲမသမာမှုတွေဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ October,31st,2015
( 20 )ဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကို ကို ဖမ်းဆီး ၊ နောက်တစ်ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
( 19 )Myanmar student leader arrested after months on the run
( 18 )ယင်းမာပင်မြို့နယ်တွင် ကြိုတင်မဲ စတင်ပေ
( 17 )Khun Tun Oo: ‘I Have No More Faith in the Election Commission’
( 16 )မဲဆွယ်ပွဲမှာ အစိုးရပိုင်ကား အသုံးပြုမှု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို အန်အယ်လ်ဒီ တိုင်ကြား
( 15 )Security concerns for Myanmar Aung San Suu Kyi as campaign attacked
( 14 )မြိတ်နှင့် ကျွန်းစုမှ ရေလုပ်သားများ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံး
( 13 )The soundtrack to Myanmar's election campaign
( 12 )အစိုးရပိုင်ပစ္စည်း မသုံးစွဲဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဦးဌေးဦး ပြောကြား
( 11 )Siam Makro eager to open first store in Myanmar
( 10 )ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ ကြိုတင်မဲ စတင်ပေး
(9)Student Leader Kyaw Ko Ko Arrested After Months in Hiding
( 8 )အစိုးရနှင့်အပစ်ရပ် ၈ ဖွဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးစတင်
(7)As Poll Nears, Open-for-Business Burma Struggles for Global Foothold
(6)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်ဟောပြောပွဲ သုဝဏ္ဏမြို့ဦးစေတီကွင်းမှာ ကျင်းပမည်
(5)Burma’s media fixate on ‘Mother Suu’
(4)ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း ဌာနချုပ်ကို အစိုးရတပ် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်
(3)Myanmar opposition party members attacked in Yangon
(2)လူမျိုးတုံး သုတ်သင်သတ်ဖြတ်မှု စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆို
( 1 )Myanmar media stack the deck for "Mother" Suu Kyi ahead of polls
ဂျပန် ဟီတာချီက ပြည်တွင်းတွင် ဓာတ်လှေကား တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မည်
ဂျပန်နိုင်ငံ ဟီတာချီကုမ္ပဏီက ဓာတ်လှေကားနဲ့ စက်လှေကား တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင် သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဟီတာချီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တစ်ဘက်မှာကလည်း ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ထဲမှာ ၀င်ရောက်နေပြီးသား ဥရောပဈေးကွက် ရှိနေတဲ့အတွက် နှစ်အနည်းငယ်ထဲမှာ ကျော်တက်သွားချင်တယ်လို့ ဟီတာချီရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဟီရိုရှိဆာတိုက ဆိုပါတယ်။
“ဥရောပ ဈေးကွက်က ဒီမှာရှိနေပြီးသား ဆိုတာ သိထားပါတယ်၊ သူတို့ထက်စာရင် ကျွန်တော်တို့ နောက်ကျ နေမယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုက ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းတွေ များမယ်လို့ ထင်တယ်၊ ဒီအခြေအနေကနေ အမှီလိုက်ပြီးကျော်တက်သွားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ခြေလှမ်းကြဲကြဲနဲ့ လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ အဆောက်အဦး တွေမှာဆိုရင်လည်း ဟီတာချီရဲ့ ဓာတ်လှေကား အစီးရေပေါင်း ၇၀ လောက်ကို ဒီနှစ်အကုန်မှာ တပ်ဆင်ဖို့လည်း အမှာစာတွေ ရထားတယ်လုို့ ဟီတာချီကပြောပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ဓာတ်လှေကား ယူနစ်ပေါင်း ၁၀၀ လောက် ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ တပ်ဆင်သွားနိုင်ဖို့ကိုလည်း ဟီတာချီကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေကနေ ရှေ့ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဈေးကွက်မှာ အနည်းဆုံး ၁၀ရာခိုင်နှုန်း လောက်တိုးတက်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းထားတယ်ဗျ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ယူနစ်ပေါင်း ၁၀၀ တပ်ဆင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပြီး ဈေးကွက်တိုးတက်မှု ၈ရာခိုင်နှုန်း ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ရှိပါတယ်” လို့လည်း Hitachi Elevator ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကီယိုရှိအဲဂူချီက ပြောပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် Thyssenkrupp (သင်ဆင်ခရု) ကုမ္ပဏီကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ကုမ္ပဏီရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဟာအချိန် (၂)နှစ်ထဲကိုရောက်လာပါပြီ။ သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လက်ရှိမှာတော့ ဓာတ်လှေကားအစီးရေ (၂၀)လောက်ပဲ တပ်ဆင်နိုင်သေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော် မရှင်ကခွင့်ပြုထားတာက နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေအဖို့ အကန့်အသတ်တေ ရှိနေတယ်လို့ Thyssenkrupp (သင်ဆင်ခရု)ရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။
“အခုလက်ရှိ အချိန်ကအားမရသေးဘူး၊ တိုးတက်မှုက နှေးကွေးနေတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တွေက အရွယ်အစား သေးငယ်နေတယ်။ ThyssenKrupp (သင်ဆင်ခရု)က အကြီးစား ထုတ်လုပ်ရေးတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရက နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေကိုကုန်သွယ်ခွင့် မပြုထားတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြီးထွားဖို့ အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်” လို့ Business Line Manager ဦးဇော်ဝင်းနိုင်က ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဓာတ်လှေကား လုပ်ငန်းပေါင်း ၆ခုထက် မနည်း ပြည်တွင်း စီးပွားဘက်တစ်ချို့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ ၃ခုလောက်က ဥရောပ နိုင်ငံတွေကဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ အာရှနဲ့ အမေရိကန်က ဖြစ်ပါတယ်။
လက်​နဲ့အလွယ်​တကူတကူ နှိုက်​လို့ရတယ်​လို့ လူ​ပြောများ​နေတဲ့ ကြိုတင်​မဲပုံး​တွေ လုံခြုံ စိတ်​ချရဖို့အတွက်​ မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​၊ သ​ပြေကုန်းရပ်​ကွက်​မှာ ချိပ်​ပိတ်​တံဆိပ်​နှိပ်​ခဲ့ ပါတယ်​။
“လွန်​ခဲ့တဲ့ရက်​​တွေက ​ဖေ့စ်​ဘွတ်ခ်​မှာ ဒါနဲ့ပတ်​သက်​တာ​တွေတက်​လာတယ်​။ လက်​နှိုက်​နိုင်​တယ်​ ဆိုတာမျိုး​ပေါ့။ အဲဒါ​ကြောင့်​ ပါတီ​​တွေက ကိုယ်​စားလှယ်​​တွေ၊ ရပ်​ကွက်​ အ​ထောက်​အကူပြု ​ကော်​မတီ​တွေ​ ခေါ်ပြီး ဘယ်​လိုလုပ်​မလဲတိုင်​ပင်​ကြတယ်​။ ​နောက်​ဆုံး​တော့ ​လက်​ကိုင်​ကလစ်ကို ချိပ်​​လောင်းပြီး ​ကော်​မရှင်​ တံဆိပ်​နှိပ်​လိုက်​တယ်​” လို့ မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​၊ သ​ပြေကုန်းရပ်​ကွက်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး ဦး​ကျော်​ဇင်​ဦးက ဒီဗွီဘီကို ​ပြောပါတယ်​။
ပလတ်​စတစ်​ပုံး​တွေဖြစ်​တဲ့အတွက်​ ​ဘေး​ထောင့်​​တွေကို အလွယ်​တကူ ဟလို့ ရ​နေတာပါ။ ဒါကို ဘယ်​လိုလုံခြုံ​အောင်​ လုပ်​ရမယ်​လို့​တော့ ပြည်​​ထောင်​စု ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ​ကော်​မရှင်​က သီးခြားညွှန်​ကြားတာ​တော့ မရှိ​သေးပါဘူး။
“ရပ်​ကွက်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက ​ခေါ်ပြီး မဲပုံး​တွေကို ဒီလိုလုပ်​လို့ရတယ်​ ​ပြော​တော့ လန့်​သွားတယ်​။ သူကပဲ ချိပ်​ပိတ်​ဖို့ အကြံ​ပေးတယ်​။ သူ့စိတ်​ကူးကို သ​ဘောကျပြီး ​ကော်​မရှင်​​ရောက်​လာ​တော့ ဒါကိုပဲ အတည်​ပြုလုပ်​ဖြစ်​သွားတယ်​” လို့ အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ်​ ကိုယ်​စား ရပ်​ကွက်​ကိုယ်​စားလှယ်​အဖြစ်​ တက်​​ရောက်​ခဲ့တဲ့ ​ဒေါ်ရင်​စိန်​က ​ပြောပါတယ်​။ ကြိုတင်​မဲ​တွေကို ​အောက်​တိုဘာ ၂၉ ရက်​က စ​ပေးနေပြီဖြစ်​ပါတယ်​။
Miss International Beauty Pageant 2015 ၏ Miss Internet ဆုအတွက် အွန်လိုင်း မဲပေးမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှမယ် အမရာငြိမ်း မဲအများဆုံးဖြင့် ရပ်တည်
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်လျက် ရှိသည့် Miss International Beauty Pageant 2015 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် အလှမယ် အမရာငြိမ်းသည် Miss Internet ဆုအတွက် အွန်လိုင်း မဲပေးမှုတွင် မဲအများဆုံးဖြင့် ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်နေသည်။
Miss International Beauty Pageant 2015 ပြိုင်ပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၅၅ကြိမ်မြောက် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် အလှမယ် အမရာငြိမ်း မှ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် Miss International Beauty Pageant 2015 ပြိုင်ပွဲ တွင် Miss Internet ဆု အတွက် official voting ဆိုပြီး မရှိတော့ပဲ Miss Internet ဆုအတွက် Miss တစ်ယောက်အပေါ် online ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်း တွက်ချက် မှုများတွင် အလှမယ် အမရာငြိမ်း ၏ ဖေ့ဘုတ် အကောင့် မှ ပုံတွေ၏ like များ ၊ အမရာငြိမ်း၏ Instragram account မှ ပုံများ၏ like တွေအပြင်၊ လက်ရှိ http://m.listas.20minutos.es/lista/miss-internacional-2015-candidatas-39... link မှ voting ရလာဒ်များကို ထည့်သွင်း တွက်ချက် သွားမည် ဖြစ်သည်။
အလှမယ် အမရာငြိမ်းကို ၎င်း၏ ဖေ့ဘုတ်မှ ပုံများ၊ Instragram account မှ ပုံများတွင် Like ပေးနိုင်ပြီး လက်ရှိတွင် http://m.listas.20minutos.es/lista/miss-internacional-2015-candidatas-39... တွင် အလှမယ်များအား မဲပေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမှတ်အများဆုံးဖြင့် ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်နေသည်။ Miss Myanmar International 2015 ဆုရှင် Emerald Nyein သည် Miss International Beauty Pageant 2015 ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက် တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ သို့ထွက်ခွာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် အလှမယ် အမရာငြိမ်းသည် Miss International Beauty Pageant Organization နှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲ နှင့် ပတ်သက်သည့် Activity များကို နိုင်ငံအသီးသီးမှ အလှမယ်များနှင့် အတူ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ Miss International Beauty Pageant ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ က ပထမဆုံး ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပြီး ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အလှမယ် ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အလှမယ် မေဘရဏီသော် တို့မှ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြသည်။ Miss International Beauty Pageant 2015 ဖိုင်နယ် ပြိုင်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၅ရက် တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ Shinagawa Prince Hotel ၌ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားဖော်ထုတ်ပြီး ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပူးပေါင်းကျင်းပမည်
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ ယခုနှစ်တွင် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဖော်ထုတ်မှုများကို အလေးထားပြီး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့်အနည်းဆုံး ခန့်မှန်းကာ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင်ကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၂၇၅၅ခုနှစ်မြောက် ကရင်သစ်ကူးနေ့ ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ရွှေကုက္ကိုမြိုင်ကျေးရွာတွင် ၂၀၁၅ခု အောက်တိုဘာ၂၅ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေအပြီးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီမှ နာယကတစ်ဦးဖြစ်သူ KNU မှ ပဒိုစောအားတိုးက “ဒီနှစ်မှာတော့ ကရင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အဓိကထားတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ အခုနှစ်က ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၅၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ အထိသုံးစွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို KNU၊ BGF၊ KNU/KNLA PC၊ DKBA၊ KPF စသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလွှာအသီးသီးမှ ပါဝင်ကူညီမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုများကို BGFမှ ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူက တာဝန်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ (၈)ရက်တိုင်တိုင်ကျင်း ပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဟောပြောပွဲ၊ ရိုးရာဒုံးအကပြိုင်ပွဲ၊ ရိုးရာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်၊ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ရိုးရာ လက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲ၊ ဇာတ်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ကာ ယခုနှစ်တွင် စစ်ရေးပြ ချီတက်ခြင်း အခမ်းအနားမဟုတ်ပဲ လူထုချီတက်အလေးပြုခြင်းအနေဖြင့်သာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ကရင်အနုပညာအစည်းအရုံး ဥက္ကဌနှင့် ပွဲတော်ကျင်းပရေးအကြံပေးဖြစ်သူ စောသမော့အဲဖောင်က “အခုလို ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်တာမြင်ရတော့ ဝမ်းသာတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနှစ်က ကရင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေကို အများဆုံး ဖော်ထုတ်မယ့်ပွဲလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်နှစ်တွေထက် ဒီနှစ်က ပိုထူးခြားတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြုလုပ်သွားမည့် ပွဲတော်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှ ဒုံးအဖွဲ့(၂)အဖွဲ့အပါအ၀င် ဒုံးအဖွဲ့စုစုပေါင်း (၅၀)ခန့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆုအနေဖြင့် အဆင့်မြင့် ပြည်နယ်ဒုံးအဆင့် ပထမ ၁၀၀ သိန်း၊ ဒုတိယ ၆၀ သိန်း၊ တတိယ ၄၀ သိန်း၊ အကြီးတန်းအဆင့် ပထမ ၆၀ သိန်း၊ ဒုတိယ ၄၀ သိန်း၊ တတိယ ၃၀ သိန်း၊ အငယ်တန်းအဆင့် ပထမ ၃၀ သိန်း၊ ဒုတိယ ၂၀ သိန်း၊ တတိယ ၁၀ သိန်းနှင့် နှစ်သိမ့်ဆုများကိုလည်း ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကရင်-မြန်မာစတိတ်ရှိုးစင်တင်တေးကဏ္ဍ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုရပုဂ္ဂိုလ်များ ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ထူးချွန်ဆုရ လူငယ်များ ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကရင်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပြင် ကရင်လူငယ်များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို တဆက်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်လည်း မြဝတီမြို့နယ် ရွှေကုက္ကိုလ်မြိုင်ကျေးရွာတွင် ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ဖူးသည်။
ဖရူဆိုမြို့နယ် ကြိုတင်မဲကောက်ရာတွင် လုံခြုံရေးမရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးမပါ
မဇ္ဈိမ/ Kantarawaddy Times
ဖရူဆိုမြို့နယ် ညောင်ဇင်ရပ်ကွက်၌ အောက်တိုဘာ ၂၉ တွင် ကြိုတင်မဲပေးကြရာသို့ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရာတွင် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အားလုံးမပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မဲလာထည့်ချိန်တွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမှုလည်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဖရူဆိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်လောင်းထံမှသိရသည်။ ဖရူဆိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသဲရယ်က “အမှန်က ကြိုတင်မဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် ပါတီကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို ဖိတ်ရမယ်။ ခေါ်ရမယ်။ မလာနိုင်ရင်တော့ သူတို့အပိုင်းပေါ့။ အခုက အားလုံးမသိလိုက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ညောင်ဇင်ရပ်ကွက်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ကြိုတင်မဲ ကောက်ခံရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ တစ်ဦး၊ မီဒီယာနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တချို့သာ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင်လည်း တောခူကျေးရွာသို့ လုံခြုံရေးသွားနေသည်ဟု သိခဲ့ရသည်။
ကြိုတင်မဲကာလတွင် လုံခြုံရေးများအနေဖြင့် မဲကောက်ခံရာ ရပ်ကွက်တိုင်းသို့ လိုက်ပါသင့်ကြောင်း၊ မဲထားရှိရာ နေရာတွင်လည်း ညလုံခြုံရေးပါ ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးသဲရယ်က ပြောသွားသည်။ ဖရူဆိုမြို့နယ် ညောင်ဇင်ရပ်ကွက်တွင် မဲဆန္ဒရှင် ၆၂၆ ဦးရှိပြီး ကြိုတင်မဲစာရင်းဦးရေ လက်ရှိမဲထည့်သူ ၄ ဦးသာရှိသည်ဟု ညောင်ဇင်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးစောဝေစတာ က ပြောသည်။
ကြိုတင်မဲပုံးများပေါ်တွင် လုံခြုံရေးကြိုး၊ တိပ်ခွေနှင့် ကပ်ထားသော်လည်း မဲပုံးပေါ်တွင် စည်းတံဆိပ် တစ်ခုရှိရန် လိုအပ်နေသည်ဟု အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ဖရူဆိုမြိုနယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) အမျိုးသားလွတ်တော် ၀င်ပြိုင်မည့် ဦးလောရင့်ဦးက ပြောသည်။ ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒရှင် ၁၇၃၈၆ ဦးရှိပြီ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၄ အုပ်စုနှင့် မြို့ပေါ်တွင် ၅ ရပ်ကွက် ရှိသည်ကို သိရှိရသည်။
လားရှိုးတွင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့မှာ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် ည ၇ နာရီ ခွဲလောက်က ပေါက်ကွဲမှု တခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
လားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက် ၉ နဲ့ အမှတ် ၆၂၆ ထောက်ပို့တပ်ရင်းရုံး အစပ်နားမှာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံး မရှိဘူးလို့ လားရှိုးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲမှူးရုံး တာဝန်ကျရဲအရာရှိ တဦးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“မနေ့က ပေါက်ကွဲသံကြားကြားချင်း ကျနော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သွားပြီးစစ်ဆေးပါတယ်။ ပေါက်ကွဲတဲ့ နေရာမှာ မြေကြီးနည်းနည်းဖွာသွားတာကလွဲလို့ ဘာမှထိခိုက်ပျက်စီးတာ မရှိပါဘူး။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူလည်း မရှိပါဘူး။ ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာနားမှာ ဘောစိလေးတွေ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အတွက် လက်လုပ်ဗုံးလို့ ယူဆရပါတယ်။”
အခုလို ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမယ့် ဒီကနေ့ လားရှိုးမြို့အခြေအနေကတော့ ပုံမှန်ဘဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဘဲဖြစ်ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရော စစ်တပ်ပါ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လားရှိုးမြို့ကို လုံခြုံရေးပေး စောင့်ရှောက်နေတယ်လို့ တာဝန်ကျရဲအရာရှိက ပြောသွားပါတယ်။
နမ့်ခမ်းမြို့၌ ကျားဖြူ ကျားခေါင်းအပြိုင် စည်းရုံးဆင်းရေး
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူစယ်ခရိုင် နမ့်ခမ်းမြို့၌ ကျားဖြူပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း နှင့် ကျားခေါင်းပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး တို့ အပြိုင်အဆိုင် စည်းရုံးရေးဆင်းကြသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည် ။
အာက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့ ၌ ကျားဖြူပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုင်းကျော်အုန်း တို့ နမ့်ခမ်းမြို့၌ ရောက်ရှိလာ ကြောင်း ၊ ပန်ပွဲကွင်း နမ့်ခမ်းမြို့လယ်၌ လူထု နှင့်တွေ့ ဆုံကာ စည်းရုံးဟောပြောကြောင်း ၊ နမ့်ခမ်းမြို့ခံ ထောင်ပေါင်းများစွာ လာရောက်ကြိုဆို ကြကြောင်း တက်ရောက်သည့် စိုင်းလုံ က ပြောပါသည် ။
“ ခွန်ထွန်းဦး ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့က ၂၁ ရက်နေ့ကလာတယ် ။ စိုင်းအိုက်ပေါင်းက မနေ့က လာတယ် ။ ဒီမှာက ပါတီတခုဘဲ ရှိစေချင်တာလေ ။ အခုတော့ နမ့်ခမ်းမြို့မပြောနဲ့ မိသားစု အချင်းချင်းတောင် အကွဲအပြဲဖြစ်နေပြီ ။ တချို့က ကျားခေါင်း ၊ တချို့ ကျားဖြူ ဖြစ်နေတယ် ” - ဟု ပြောသည် ။
“ ပါတီ နှစ်ခု သုံးခုမကလို့ ဘယ်နှစ်ပါတီဘဲရှိရှိ ဒါ အခွင့်အရေးတရပ်ပဲ ။ ယူတတ်ရင် ။ ကောင်းတဲ့ပါတီ ၊ ကောင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ကျနော်တို့မှာ ရွေးချယ် ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ။ မူမမှန်တဲ့ပါတီ ။ ရပ်တည်ချက် အားမကောင်းတဲ့ပါတီက သူ့ဟာသူ ကျသွားမှာဘဲ ။ သျှမ်းပါတီ နှစ်ခု ပြိုင်လာတာ နိုင်ငံရေး လေ့လာဖို့ အခွင့်အလှမ်းတရပ်ပဲ ” - ဟု စိုင်းလူ က လည်း သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောသည် ။
ကျားဖြူပါတီက ၁၄ ပြည်နယ် ၊ ၁၄ ယူနစ်ကို လက်ခံပြီး သျှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ ဖြစ်ရေးအတွက် အားသန်သည် ။
ကျားခေါင်းပါတီကမူ မြေပြန့်ဗမာလည်း တောင်တန်းသားများနည်းတူ တစ်ယူနစ်တာ ခံစားခွင့်ရှိသည် ဟူသည့် ၈ ယူနစ်မူကိုလက်ခံထားပြီး ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး သို့ မဟုတ် အသစ်ရေးဆွဲရေးဘက်အား သန်သည် ။
လက်ရှိနေပြည်တော် အစိုးရ ကမူ နေပြည်တော် အထူးတိုင်း အပါအဝင် ဗမာလူမျိုးအများစုဖြစ်သည့် တိုင်းဒေသကြီး ၈ တိုင်း နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ် ၇ ပြည်နယ် ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ကာ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေပါသည် ။
ဥပဒေ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝ မရသည့် အနေအထားတွင် ဖြစ်လာနိုင်မည့် အန္တရာယ်ကို စဉ်းစားပြီး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သတိပြု စောင့်ရှောက်သင့်သည်ဟု ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
မီးပုံးပျံပျက်ကျ၍ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းတွင် မီးလောင်
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၄၄ ရပ်ကွက် န၀ရတ် ၂ လမ်းက နေအိမ်တလုံး ခေါင်မိုးပေါ် မီးပုံးပျံ ပျက်ကျတာကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
မီးလောင်ရာကို မီးသတ်ကား ၅ စီးခန့် လာရောက်ငြှိမ်းသတ်ပြီး နေအိမ်တလုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမီးလောင်မှုကို Level 1 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် သေဆုံးဒဏ်ရာရသူ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို မီးပုံးပျံလွှတ်မှုကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကလည်း နေပြည်တော် လျှပ်စစ်စွမ်းဝန်ကြီးဌာန သပြေဝ ၂၃၀ KV ဓာတ်အားခွဲရုံ Switch Yard အတွင်းက ဓာတ်အားအဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်တဲ့ Bus DS အပေါ် မီးပုံးပျံပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခဲ့လို့ တနိုင်ငံလုံးနီးပါး အချိန်ပိုင်း မီးပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။
SSPP နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကြီးထိကာ နေအိမ်သုံးလုံးပျက်ဆီးဟုဆို
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSPP/SSA) ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်အနီးရှိ ကျေးရွာအတွင်း အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက် ည ၁၂ နာရီ ဝန်းကျင်က အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် နေအိမ်သုံးလုံး ပျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု SSPP/SSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလက ပြောသည်။
မိုင်းရှူးမြို့နယ် SSPP/SSA ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်အနီးရှိ ကျေးရွာတွင် ကျူမောင်ခေါင်တွင် အခြေစိုက်ထားသော အစိုးရ စစ်တပ်၏ ၁၂၀ လက်နက်ကြီး ၈ လုံး ကျရောက်ခဲ့သဖြင့် ကျေးရွာရှိ နေအိမ်နှစ်လုံး ထိခိုက်ပျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု SSPP/SSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလက ပြောသည်။
“ည ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ ၁၂၀ လက်နက်ကြီးနဲ့ ကျူမောင်ခေါင်ကနေ ပစ်တာ။ ၁ နာရီထိ လက်နက် ၈ လုံးပစ်တယ်။ ဌာနချုပ်မှာပဲ ကျတာ။ နေအိမ် နှစ်အိမ် မီးဖိုဆောင်တွေ ပျက်ဆီးသွားတယ်။ တခြား လက်နက်ကြီး ထိမှန်တာတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ စာသင်ကျောင်းနားမှာ ဖြစ်တာဆိုတော့ ကျောင်းသားတေါလည်း ထွက်းပြေးရတယ်”ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ၎င်းက ဆက်ပြီး “မနေ့က ဝမ်ဟိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီတင်းကျွတ်ပွဲလေ။ အဲဒီမှာ ပွဲရှိတယ်။ အဲဒီထဲကို ပစ်လာတာ။ ပွဲထဲပစ်လာတာပေါ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ၂၀ ကိုက်ကျော်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ လမ်းမပဲ ခြားတယ်။ ရွာသားတွေက နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာကို ထွက်ပြေးသွားတာတွေ ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
ထိုလက်နက်ကြီး အထက်တန်းကျောင်းအနီး ကျရောက်ခဲ့သဖြင့် စာသင်ကျောင်းတွင် နေထိုင်နေသော ကျောင်းသူကျောင်းသား ၂၀၀ ကျော် ကျေးသီးမြို့နယ် ပန်လော့ကျေးရွာဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီဖြစ်သလို၊ ရွာသားများလည်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည်ဟု သူက ပြောသည်။ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီး ပြန်လည် ပစ်ခတ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်) နံနက်ပိုင်းတွင် ဝမ်ဟိုင်းမှ ရွာလူကြီးများက ဝမ်ဟိုင်းကျေးရွာမှ ကလေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ရှောင်တိမ်းခိုင်းထားလိုက်သည်ဟု ဝမ်ဟိုင်းဒေသခံ ကျောင်းသား ဝမ်ဟိုင်းမှ ကျောင်းသား အိုက်စိုင်းလင်းက ပြောသည်။
ယနေ့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသော်လည်း အစိုးရစစ်တပ်က ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ် အနီးတဝိုက်တွင် လှုပ်ရှားနေသဖြင့် စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောသည်။ လက်ရှိ မိုင်းရှူးမြို့ပေါ် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းနှင့် အိမ်တစ်အိမ် သုံးနေရာနှင့် ဟိုင်းပါကျေးရွာနှင့် ဝမ်ဆော့ ကျေးရွာများတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းများဖွင့်လစ်ထားပြီး စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကာ တိုက်ပွဲများ မရပ်စဲသဖြင့် ထပ်မံ တိုးမြင့်လာဖွယ်ရှိနေသည်ဟု မိုင်းရှူးဒေသခံ နန်းဆိုင်ဟိန်းက ပြောသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မူကြမ်းအား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် SSPP/SSA ကလည်း လက်မှတ်မထိုးသေးပေ။ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်မှစတင်၍ အစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်အနီးသို့ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်တွင် အစိုးရနှင့် တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၈ ဖွဲ့နှင့် NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း လက်မှတ်မထိုးသေးသည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ၏ တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်များနှင့် အစိုးရ စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
NCA မထိုးသည့် အဖွဲ့များ ပန်ဆန်းမြို့၌ တွေ့ဆုံမည်
၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ကမကထ ပြုမှုဖြင့် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးစာချုပ်လက်မှတ် မထိုးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပန်ဆန်းမြို့၌ လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ဆန်းပိုင်း၌ တွေ့ဆုံမည်ဟု သိရသည် ။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁ - ၃ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ NCA လက်မှတ် မထိုးသည့် အဖွဲ့များကိုသာ ဖိတ်ကြားထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံ နယ်ဒါးမြ ဦးဆောင်သည့် KNDO တပ်ဖွဲ့ကိုတော့ ဖိတ်ကြားထားကြောင်း ၊ အစည်းဝေးပွဲ တက်ရောက်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ဖိတ်စာလက်ခံထားရသည့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည် ။
“ ဆွေးမယ့်အကြောင်းရင်းက ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် ကိစ္စရယ် ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတက်လာမယ့် အစိုးရ ကိစ္စရယ် အဓိက က အဲဒီ နှစ်ချက်ပဲပါတယ် ။ အဲဒီကိစ္စအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲပေါ့ ” - ဟု အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည် ။
“ အစည်းအဝေးဖိတ်တာတော့ UNFC အဖွဲ့ဝင် အများစုပါတယ် ။ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ UNFC အဖွဲ့ဝင် တွေတော့မပါဘူးပေါ့ ။ ဆိုပေမယ့်လဲ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ လားဟူ LDU ၊ ‘ ဝ’ WNO ၊ ရခိုင် ANC တို့တော့မဖိတ်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ကရင် KNDO နဲ့ ကယန်း KNLP တို့ကိုတော့ဖိတ်ထား တယ်လို့သိရတယ် ” - ဟု UNFC အဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတဦးက ပြောသည် ။
အစည်းဝေးတက်ရောက်မည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ၀ တပ်ဖွဲ့အပါအဝင် ၁၂ ဖွဲ့ ရှိကြောင်း ၊ ထိုအဖွဲ့များ တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ၊ သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA ၊ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ၊ ပလောင် (တအာင်း) တပ်ဖွဲ့ TNLA ၊ ရခိုင့်တပ်မတော် AA ၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ NDAA – ESS ၊ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA ၊ ကရင် KNDO ၊ ကယန်း ပြည်သစ်ပါတီ KNLP ၊ နာဂ NSCN – K နှင့် အိမ်ရှင် ဝ ပြည်သွေး စည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP/UWSA တို့ဖြစ် ကြသည် ။
“ အခု အစည်းအဝေးက ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ အစိုးရသစ်အတွက်ပဲ တကယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကို ဖိတ်ရမှာပေါ့ ။ အခုက လက်မှတ်မထိုးတဲ့ အဖွဲ့ကိုဘဲ ရွေးဖိတ်တယ်ဆိုတော့ NCA ကိစ္စလည်း ပါနိုင်တယ် ။ မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ထိုးစစ်ဆင်ကိစ္စတွေလဲ ပါနိုင်တယ် ” - ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်တဦးကလဲ ပြောသည် ။
ပြီးခဲ့သည့် မေလကလဲ ထိုကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အစည်းအဝေး ပန်ဆန်းမြို့၌ ပထမ တကြိမ်ကျင်းပခဲ့ဖူးသည် ။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အရ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး အား ၀ တပ်ဖွဲ့မှ နောက်ထပ်တကြိမ် ကမကထ ပြုကျင်းပမည် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ၀ တပ်ဖွဲ့မှ ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုမည် စသဖြင့်ပါဝင်သည် ။
တပ်နဲ့တပ်မိသားစု မဲစာရင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ တ၀က်လောက်သာ ပါဝင်လာ
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာများရောင်းမည်
ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အစုရှယ်ယာများ ရောင်းချမည့် အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို အောက်တိုဘာ ၃၀ တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Yangon Bus Public Company Limited) သည် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက် ခွင့်ကို အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာက အောက်တိုဘာ ၂၉ ၌ ဖော်ပြသည်။
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ဇူလိုင် ၂၇ ရက်က ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ အများပြည်သူသွားလာမှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရမည်ဟုဆိုသည့် ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အစုရှယ်ယာများကို ၀ယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား မည်သူမဆို အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်နိုင်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မင်္ဂလာခန်းမ၌ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရီခွဲအထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဓါးခုတ်ခံရမှု အခြေအနေ
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကျော်ကိုကို ဖမ်းဆီးခံရ
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကို ကို ယနေ့နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေးအနီး၌ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
“ကျော်ကိုကိုနဲ့အတူ လူငယ်တဦးပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ ကြားတယ်။ ကျနော်တို့ အခုပြန်လွတ်လာသူနဲ့ အဆက် အသွယ်ရဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဘယ်ရဲဌာနက ခေါ်သွားလဲဆိုတာ မသိရသေးဘူး။ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းလို့တော့ ကျနော် ထင် ပါတယ်”ဟု ဗကသ အဖွဲ့ဝင် ကိုလင်းထက်နိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၁၀ ရက်က လက်ပံတန်းမြို့၌ ကျောင်းသားများ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရမှုအပြီး မတ်လ ၁၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီး ပြည်လမ်းပေါ်၌ ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြရာ၌ ဦးဆောင်ပါဝင်မှုဖြင့် ကမာရွတ်ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ခဲ့သော ကျောင်းသား ၆ ဦးတွင် ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုလည်း တဦးအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
အမှုဖွင့်ခံထားသူ ၆ ဦးမှာ ကိုကျော်ကိုကို၊ ကိုဝင်းကျော်မိုး၊ ကိုနန္ဒာစစ်အောင်၊ ကိုလင်းထက်နိုင်၊ ကိုထက်ခိုင်စိုးနှင့် ပိုပိုတို့ ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့အား ကမာရွတ် ရဲစခန်းက ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ပုဒ်မ ၁၄၅၊ ပုဒ်မ ၁၄၇ နှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲထားသည်။
ထို့အပြင် ဗကသ ကျောင်သားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုသည် သာယာဝတီ ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အလိုရှိနေသူ စာရင်းတွင်လည်း ပါဝင် နေသည်ဟု ဗကသ အဖွဲ့ဝင် ကိုလင်းထက်နိုင်က ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကို ကို လွှတ်ပေးရန် ကမာရွတ်ရဲစခန်း အရှေ့၌ လာရောက်တောင်းဆိုကြသူ တချို့ကိုပါ ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများ၌ သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက် ကမာရွတ် ရဲစခန်းသို့ ဧရာဝတီက တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ဖြေကြားမည့်သူ မရှိပေ။
လက်ရှိတွင် ကို ကျော်ကိုကိုအား အောင်သပြေ စစ်ကြောရေးတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု သိရကြောင်း ဗကသ ကျောင်းသားများက ပြောသည်။
အလားတူ လက်ပံတန်းမြို့၌ ပညာရေးဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြမှုကြောင့် သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်၌ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခံနေရသည့် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုသည်လည်း ယနေ့တွင် ၇ ရက် ရှိပြီဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် သာယာဝတီခရိုင် ကျောင်းသားများ တရားရုံးထုတ်ချိန်တွင် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း၏ အခြေအနေ သည် ဆိုးဝါးသည့် အခြေအနေ မရှိသေးကြောင်း၊ သို့သော် ယနေ့အချိန်အထိ မည်သည့်အခြေအနေ ရှိသည်ကို မသိရသေးကြောင်း ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ မလဲ့လဲ့နွယ်က ပြောသည်။
“ရုံးထုတ်တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ ပေါင် ၂၀ လောက် ကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာသူ လမ်းလျှောက်နိုင်သေးတယ်။ အခု၂ ရက်ရှိပြီ။ ဘယ်လို အခြေအနေရှိလဲ လုံးဝစုံစမ်းလို့ မရသေးဘူး”ဟု မလဲ့လဲ့နွယ်က ဆိုသည်။
ကိုအောင်မှိုင်းဆန်းသည် တနိုင်ငံလုံးရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို မလွှတ်ပေးလျှင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ စာရေးသားပေးပို့ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း တစုံတရာ ထူးခြားမှု မရှိသည့်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်မှ စတင်ပြီး အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တောင်းဆိုနေစဉ် ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို ကျော်ကိုကို အဖမ်းခံလိုက်ရခြင်းသည် ကောင်းမွန်သည့် အလားအလာ မရှိကြောင်း ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများက ပြောသည်။
“နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက တောင်းဆိုနေတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး လူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို ကျော်ကိုကို အဖမ်းခံရ တာဟာ ကျနော်တို့အတွက် တော်တော် စိတ်ပျက်စရာပါပဲ”ဟု ကိုလင်းထက်နိုင်က ပြောဆိုသည်။
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မေး
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ငပုတောမြို့၊ ဥသျှစ်ကွင်း ကျေးရွာသို့ အောက်တိုဘာလ၂၉ရက်နေ့က ရောက်ရှိစဉ် ဒီမိုကရေစီ စနစ် အပြောင်းအလဲကို သူ၏ အစိုးရက စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဘာများ ပြောင်းလဲလိုသေးသနည်း၊ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲဟု ဒေသခံများကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“တပ်မတော်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်ကနေပြီးတော့ ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ ခုနကလို အစိုးရစနစ်နဲ့ လွှတ်တော်တို့အစိုးရတို့ စသည်အားဖြင့် ဒီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းပြီးပြီ နောက်ထပ်ဘာလို့များ ပြောင်းချင်သေးလဲ၊ နောက်ထပ် ပြောင်းဖို့ကတော့ အခြားမရှိတော့ဘူး ကွန်မြူနစ်ပဲ ရှိတော့တယ် ကွန်မြူနစ်တော့ ဘယ်သူမှမပြောင်းချင်ဘူး ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား” ဟု သမ္မတက ပြောခဲ့သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှုများအတွင်း ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဟု ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဟု ပြောဆိုမှုများနှင့် တိုက်ဆိုင်စွာပင် ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲဟု သူက တန်ပြန် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“ပြည်သူများလိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းပြီးပြီ ခုနလို ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြောင်းပြီးပြီ၊ ပြောင်းပြီးတဲ့စနစ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်သွားပါမယ်” ဟု ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တေ်ာတို့အစိုးရဟာ စနစ်ဟောင်းတစ်ခုကနေ စနစ်သစ်တစ်ခုကို ကူးပြောင်းရတယ်ဆိုတာ အလွန်မှ အန္တရာယ်များတယ်၊ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့လို တစ်ချိန်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကူးပြောင်းတဲ့နိုင်ငံ အများကြီးရှိပါတယ် အာရပ်နိုင်ငံ၊ မူဆလင် နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒီနေ့အထိ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မပြောင်းနိုင်ဘဲနဲ့ နေ့စဉ်နဲအမျှ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်” ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့က ခုနကလို တလှမ်းချင်း သတိထားပြီးတော့ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ အခုဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွေးထွက်သံယိုမရှိဘဲ ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်၊ အဲ့တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ ပြောင်းလဲပါပြီ” ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကရင်လူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နော်ပန်းသဉ္ဇ္ဇာမျိုး နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
မြောက်ဦးနန်းတော်ရာကုန်း မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဖြင့် မဲပေးကြရန် ဦးမောင်မောင်အုန်းတိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အတွက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့် မဲပေးကြရန် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်အုန်းက တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ယင်းကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ရှိ နန်းရာကုန်း၌ မြောက်ဦးမြို့နယ်မှကြံ့ခိုင်ရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ယခုကဲ့သို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရခိုင်သားမှန်ရင် ရခိုင်ပါတီပေးတာ။ အပြစ်မရှိဘူး။ မှန်တယ်။ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ပါတီကော ဘာပါတီမို့လို့လဲ။ ရခိုင်သားတွေနဲ့ ရခိုင့်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဖွဲ့ထားတဲ့ ရခိုင်ပါတီတစ်ခုပါပဲ။ နာမည်ကသာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဖြစ်နေတာ။ အားလုံးက ရခိုင်သား။ ယနေ့ ဒီမှာ မြောက်ဦးသားတွေ အားလုံး ရခိုင်သားတွေ။ မြောက်ဦး အကျိုးကို ဆောင်ရွက်မယ့် သူတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ ရခိုင်ပါတီတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော်ထောက်ခံပါတယ်။ ရခိုင်သားမှန်လျှင် ရခိုင်ပါတီပေးပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့လည်း ရခိုင်ပါတီတစ်ခုပါပဲလို့။ ဒါကြောင့်မို့လို့
ပါတီရဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ပါတီကိုလည်း မိဘပြည်သူများက အလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ကျနော်ပြောလိုပါတယ်”ဟု ဦးမောင်မောင်အုန်းက ဆိုသည်။
ဦးမောင်မောင်အုန်းသည် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြ်ိုင် အရွေးခံမည့်သူဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင်ဝင်ရောက်အရွေးခံခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လို၍ဟု ပြည်သူများကဝေဖန်ပြောဆိုနေခြင်းကိုလည်း ဦးမောင်မောင်အုန်းက အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် တုန့်ပြန် ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
“မိဘပြည်သူများကို ရိုးသားစွာဝန်ခံပါရစေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန် စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်းရပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ”ဟုသူက ဆိုသည်။
သို့သော် သူ့အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကို ဆက်မလုပ်တော့ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုခဲ့မှု မရှိခဲ့ပါ။
ယင်းနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်တွေ့ဆုံပွဲသို့ မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် ပါတီဝင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ အင်အား ၁ဝဝဝ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဦးနိုင်ငံလင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှု တုံ့ပြန်ခြင်းမလုပ်ရ...
အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် အဖွဲ့များ နှင့် ...
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ေ...
ရန်ကုန်က ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့ မဲရုံမှာ EUလေ့လာစောင်...
တီးတိန်မြို့နယ်ရှိ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား တစ်ထောင်...
သိမ်းဆည်းခံမြေယာပြသနာနဲ သုံးသပ်အကြံပြုစာတမ်း မီဒီယ...
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားနေသည့်ပါတီ မ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလ...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း...
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကုန်ဈေးနှုန်းများ သိသာစွာမြ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ရွေးကောက်ပွဲအမီ ပြန်လွှတ...
ကရင်ပါတီများ အမှတ်တံဆိပ် ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်၍ ဒေသခံမ...
Prince & Princess International 2016 ပြိုင်ပွဲ အတွ...
သတင်းမီဒီယာတွေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစ...
ဘန်ချောင်း ကျောက်မီးသွေးတွင်း လုပ်ငန်းများ ချက်ခြင...
ဦးအောင်မောင်း(မန္တလေးမြို့တော်ဝန်) နှင့် တွေ့ဆုံမေ...
ပြောင်းလဲရန် ကွန်မြူနစ်စနစ်သာ ကျန်ဟု ပြောဆိုမှု သမ္မ...
အဖွဲ့ချုပ် ကုိုယ်စားလှယ် ဦးနုိုင်ငံလင်း အသက်အန္တရာ...
ရွေးကောာက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး မုံရွာမှာ အနုပညာရှင်တေ...
ရခိုင်တွင် ALP စစ်ချီတေး ဖွင့်မှုဖြင့် ရွာသား ၂ ဦး...
ဒီချုပ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဓါးခုတ်ခဲ့သူ...
ပစ်ခတ်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အစည်း...
မြ၀တီခရိုင် ကျေးရွာတွေမှာ ပယ်မဲ မဖြစ်စေရေးအတွက်ေ...
ဟင်္သာတမြို့ပေါ် စစ်တပ်တွင်း မဲပေးနိုင်သူရဲ့ သုံးပုံတ...
ဓါးခုတ်ခံရသည့် NLDအမတ်လောင်း အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်စ...
ထားဝယ်တွင် မလုံခြုံသည့် ကြိုတင်မဲပုံများကို ပြင်ဆင...
ဂျပန် ဟီတာချီက ပြည်တွင်းတွင် ဓာတ်လှေကား တပ်ဆင်ခြင်...
ကြိုတင်​မဲပုံးများ လုံခြုံ​ရေး မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်ြ...
Miss International Beauty Pageant 2015 ၏ Miss Inte...
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားဖော်ထုတ်ပြီး ကရင်လက်နက်က...
ဖရူဆိုမြို့နယ် ကြိုတင်မဲကောက်ရာတွင် လုံခြုံရေးမရှိ...
နမ့်ခမ်းမြို့၌ ကျားဖြူ ကျားခေါင်းအပြိုင် စည်းရုံးဆ...
မီးပုံးပျံပျက်ကျ၍ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းတွင် မီး...
SSPP နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကြီးထိကာ...
တပ်နဲ့တပ်မိသားစု မဲစာရင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ...
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီ အစုရှယ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဓ...
မြောက်ဦးနန်းတော်ရာကုန်း မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွင် ကြံ...
စစ်မှန်သည့် ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဆောင်ရွက်စရာ အများအပြ...
ကျောက်တော်တွင် ဖားရှာထွက်သူ တစ်ဦးကို သေဆုံး၍ တွေ့...
သူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရအကြောင်း ဟင်္သာတ သူတို့ပြောစကာ...
အမျိုးသမီးများနှင့် လိင်မှုဆက်ဆံရေး လျော့နည်းလာခြင်...
ကြိုတင်မဲပုံးတွေ လုံခြုံမှု မရှိလုို့ မဲမသမာမှု ဖြ...
ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကို ဖမ်းဆီးခံ...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံေ...
ဗကသခေါင်းဆောင် ကျော်ကိုကို ဖမ်းခံရ
သံဃာ ၂၀၀၀ ကျော်နဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ​မြဝတီမြို့နယ်...
SSPP/SSA ဋ္ဌာနချုပ်ရှိသည့် ဝမ်ဟိုင်းကျေးရွာ လက်နက်ကြ...
စက်မှုဇုန် အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုကို ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ...
၀ါကျွတ်လပြည့်နေ့ မြောက်ဦး သျှစ်သောင်းဘုရားသို့ လာ...
ပြည်ခရိုင်ရဲရုံးက ရဲတပ်သားတွေ ကြိုတင်မဲ စတင်ပေး
ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းကျောင်းသူ လူသတ်မှု မြန်မာ ၄ ဦ...
ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ပြုလုပ်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ October,30th,2015
ချစ်သမီးကို ပုဒ်မထပ်တိုး တရားစွဲဆို
Burma's Hijack မြန်မာ့လေယာဉ် ပြန်ပေးဆွဲမှု ဖြစ်ရပ်မ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုမဲပေးရင် မီတာပေးမယ်ဆိုပြီး မဲဆ...
ရနောင်းလူသတ်မှု ဖမ်းဆီးခံမြန်မာ ၄ ဦးကို သံရုံးနှင်...
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို.နယ်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေ အ...
Enterprise India Show အိန္ဒိယကုန်စည်ပြပွဲကြီး ကျင်း...
NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား ၈ဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ ကော်...
မဲပေးပိုင်ခွင့်စာရင်းမှာ ပိုလျှံမဲစာရင်း ဦးရေ တိ...
Miss Global 2015 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အလှမ...
အင်အားကြီး ပါတီတွေ အောင်နိုင်ရေး လုပ်နေချိန် ပါတီင...
ကယားပြည်နယ် ကြိုတင်မဲပေးမှု အခြေအနေ တိုက်ရိုက်မေြး...
၀န်ထမ်းတွေ ကြိုတင်မဲ စတင်ပေးမှု အခြေအနေ
အစိုးရတပ်မှ လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် စစ်ဘေး...
ဆန္ဒမဲ ပေးရာမှာ အချိန်လုံလောက်မှု မရှိနိုင်လို့ အခန်...
ရန်ကုန်မြို့မှ ပဲခူးဟံသာဝတီလေဆိပ်သို့ဆက်မည့် အထပ်ြ...
NLD မဲမပေးဖို့စာတွေ ကျောင်းအစည်းအဝေးမှာ ဖြန့်ဝေလို...
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ခ မပေးသွင်းသူမ...